I-Tamar Haspel Archives - I-US Ilungele Ukwazi
Umkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology, Izimpendulo ze-GMO, iCropLife: izinhlelo zemboni yokubulala izinambuzane PR
Posted on September 2, 2020 by UStacy Malkan
I-Council for Biotechnology Information (CBI) bekungumkhankaso wobudlelwano bomphakathi owasungulwa ngo-Ephreli 2000 yizinkampani eziyisikhombisa ezihamba phambili zamakhemikhali / imbewu kanye namaqembu abo ezohwebo ukunxenxa umphakathi ukuthi wamukele ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo. Lesi sinyathelo senziwe ngokuphendula ukukhathazeka komphakathi mayelana nezingozi zezempilo nezemvelo zokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo, futhi uthe kuzogxilwa kuyo ukwenza imifelandawonye kulo lonke uchungechunge lokudla ukukhuthaza izitshalo ze-GMO (“ag biotech”) njengenzuzo.
I-CBI ivalile isitolo e2019 futhi yahambisa izimpahla zayo - kufaka phakathi umkhankaso wokumaketha Izimpendulo ze-GMO, eziqhutshwa yinkampani yakwaKetchum PR - ngaphesheya kweCropLife International, iqembu lokuhweba lamazwe omhlaba lezinkampani zokubulala izinambuzane.
Bheka: Iqembu eliyinhloko lezinkulumo-ze zomkhakha wezibulala-zinambuzane I-CBI iyavala; Izimpendulo zeGMO zidlulela kuCropLifeI-USRTK (2020)
Ifomu lentela le-CBI: ligxile kubantu besithathu
I-CBI isebenzise ngaphezulu kwe- $ 28 million kusuka ku-2014-2019, ngokusho kwamarekhodi wentela (bona 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) kumaphrojekthi akhuthaza ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo. Njengoba kuphawulwe kwifomu lentela ka-2015, I-CBI ibigxile ngokusobala ekuthuthukiseni nasekuqeqesheni abakhulumeli benkampani yangaphandle - ikakhulukazi izifundiswa, abalimi kanye nochwepheshe bezokudla - ukukhuthaza imibono yezimboni ngezinzuzo zama-GMO.
Amaphrojekthi axhaswe yi-CBI afaka izimpendulo ze-GMO (ngefemu yezobudlelwano bomphakathi neKetchum); Ukubuyekezwa kwezifundo, iqembu elalithi alizimele ngemboni; Izinkambu zeBiotech Literacy Project ezinkampanini ezibanjelwe emanyuvesi aphezulu (nge-Academics Review) kanye neGlobal Farmer Network.
Izimpendulo ze-GMO / Ketchum
Izimpendulo ze-GMO yi- iwebhusayithi yezokumaketha kanye nomkhankaso wobudlelwano bomphakathi esebenzisa amazwi ezifundiswa nabanye ukukhuthaza ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo kanye nemithi yokubulala izinambuzane. I-CBI isebenzise amaRandi ayizigidi ezingama-14.4 enkampanini yezobudlelwano bomphakathi neKetchum phakathi kuka-2014-2019 ukuqhuba i-PR salvo, ngokusho kwamafomu entela.
Izimpendulo zeGMO ziveza uxhaso lwazo lomkhakha kwiwebhusayithi yayo futhi ithi ithuthukisa imibono yochwepheshe abazimele. Kodwa-ke, izibonelo zivele ukuthi uKetchum PR wabhala ezinye zezimpendulo ze-GMO ezinikezwa "ochwepheshe abazimele" (bheka izindaba ku New York Times futhi Forbes). Izimpendulo zeGMO zivela nasemibhalweni kaMonsanto PR njengabalingani emizameni yomkhakha yokwenza vikela ama-herbicides asuselwa ku-glyphosate kusuka ekukhathazekeni komdlavuza, naku zama ukudicilela phansi ucwaningo lwezintshisekelo zomphakathi uphenyo olwenziwe yi-US Right to Know ukuthola ubudlelwano obufihliwe phakathi kwezinkampani zokubulala izinambuzane kanye nezifundiswa ezithuthukisa imikhiqizo yezolimo.
Isibonelo sendlela izimpendulo zeGMO ezakha ngayo ithonya ngezintatheli ezibalulekile, bheka kubika eHuffington Post mayelana nokuthi uKetchum ubuhlobo obulinyiwe nomlobi wephephandaba waseWashington Post uTamar Haspel. UHaspel wayeyi umgqugquzeli wokuqala we-GMO Answers, futhi kamuva wabamba iqhaza kwi-CBI exhaswa ngemali Iphrojekthi Ye-Biotech Literacy imicimbi yemiyalezo. A ukubuyekezwa komthombo kwamakholomu kaHaspel aqhutshwa yi-USRTK uthole izibonelo eziningana zemithombo engaziwa yomkhakha nolwazi oludukisayo kuma-athikili akhe mayelana nezibulala-zinambuzane.
Izimpendulo zeGMO zamukelwa njengomzamo ophumelelayo we-spin ngo-2014 lapho wawunjalo kufakwe ohlwini lomklomelo wokukhangisa we-CLIO esigabeni se- "Public Relations: Crisis Management & Issue Management." Kwividiyo ekhiqizelwe lo mklomelo, uKetchum uziqhayisa ngokuthi i-GMO Answers "icishe yaphindeka kabili ukusakazwa kwabezindaba ngama-GMO," futhi wathi "bayayiqapha ngokusobala ingxoxo" ku-Twitter lapho "balinganise ngempumelelo ukusebenzisana okungu-80% nabaphikisi." Le vidiyo isuswe ngemuva kokuthi i-US Right to Know iyinakile, kepha thina uyigcine lapha.
Imboni yezokudla ibhalise izifundiswa kwi-GMO ebeka impi, ama-imeyili akhombisa, ngu-Eric Lipton, New York Times (2015)
Iphaneli yesayensi yaseMelika ingalahleka ekuhumusheni, Abangane Bomhlaba (2017)
Ukubuka ngaphakathi ukuthi iMonsanto, inkampani ye-PR nentatheli zinikeza abafundi umbono osontekile ngesayensi, nguPaul Thacker, uHuffington Post (2019)
Monsanto idokhumenti ekhishwe ngo-2019
Ngenkathi i-USRTK ifaka ama-FOIAs ukuthi aphenye ubudlelwane bemboni nezifundiswa, IMonsanto yazilwela.
I-CBI inikeze ngemali engama- $ 650,000 ku- Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, engenzi-nzuzo ethi ikutholile ayikho imali yezinkampani. Leli qembu lasungulwa ngokubambisana nguBruce Chassy, ​​PhD, uprofesa osuka e-University of Illinois e-Urbana-Champaign, noDavid Tribe, PhD, umfundisi omkhulu e-University of Melbourne.
Kwasethwa imibhalo etholwe yi-US Right to Know eveze ukubukezwa kwezifundo ngokusobala njengeqembu langaphambili ngosizo lwabaphathi beMonsanto kanye nomqondisi wangaphambili wezokuxhumana wenkampani UJay Byrne. Leli qembu lixoxe ngokusebenzisa i-Academics Review njengemoto yokuhlambalaza abagxeki bama-GMO kanye nezolimo, ukuthola iminikelo yenkampani nokufihla iminwe kaMonsanto.
Ukubika okuhlobene: Izigxivizo zeminwe zeMonsanto Zithole Konke Ukuhlaselwa Kwe-Organic Food, nguStacy Malkan, Huffington Post (2017)
Iphrojekthi ye-Biotech Literacy Project yenza imicimbi
I-CBI ichithe imali engaphezulu kwama- $ 300,000 kokukabili “Izinkambu zeBiotech Literacy Project”Eyayibanjelwe e-University of Florida ngo-2014 nase-University of California, eDavis ngo-2015, ngokusho kwamarekhodi entela. Le mali ihanjiswe nge-Academics Review, ebihlele izingqungquthela kanye ne- Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, elinye iqembu elisiza iMonsanto ngamaphrojekthi we-PR ngenkathi ithi izimele.
Izinsuku ezintathu imicimbi yekamu ebhuthini eqeqeshiwe abafundi, ososayensi kanye nezintatheli ezindleleni zokuxhumana nezokunxenxa ukukhuthaza nokuvikela ama-GMO nemithi yokubulala izinambuzane, futhi babe nezinhloso ezicacile zezepolitiki zokunqanda ukufakwa kwelebuli le-GMO e-US
Ukubika okuhlobene: Ukugcwala kwama-GMO: Indlela imboni ye-biotech eyihlakulela ngayo imithombo yezindaba eyakhayo - futhi ikukhuthaze ukugxekwa, NguPaul Thacker, The Progressive (2017)
Amaqembu kaMonsanto 'abalingani' avikela i-Roundup
Yize i-GMO Answers, Academics Review kanye ne-Genetic Literacy Project zonke zathi zazimele ngaphandle kwethonya lemboni, womathathu la maqembu avela Imibhalo ye-Monsanto PR “njengabalingani bemboni” inkampani yenze imizamo yayo yokwenza vikela ama-herbicides asuselwa ku-glyphosate asuselwa ekukhathazekeni komdlavuza.
Idokhumenti yeMonsanto PR ixoxa ngezinhlelo zokuvikela i-Roundup ekukhathazekeni ngomdlavuza
Incwadi yokubala yezingane
I-CBI nayo ikhiqize incwadi yezingane yokufaka imibala nomsebenzi ukukhuthaza ama-GMO. I- isixhumanisi sencwadi, kanye newebhusayithi ye-WhyBiotech.com eyenziwe yi-CBI, manje eqondisa kabusha eqenjini lokuhweba labakhiqizi nabasabalalisi bama-cannabinoid asuselwa ku-hemp.
Okuhlobene nathi US Right to know posts
Izimpendulo ze-GMO iyithuluzi le-PR lokulawulwa kwezinkinga ze-GMO kanye ne-pesticides (kubuyekezwe ngo-2020)
Iqembu eliyinhloko lezinkulumo-ze zomkhakha wezibulala-zinambuzane I-CBI iyavala; Izimpendulo zeGMO zidlulela kuCropLife (2020)
Umkhankaso weMonsanto wokulwa ne-US Right to Know (2019)
IMonsanto ithembele kulaba 'abalingani' bayohlasela ososayensi abaphezulu bomdlavuza (2019)
Ukubuyekezwa Kwezifundiswa: Ukwenziwa Kweqembu Langaphambili LeMonsanto (2018)
Iphrojekthi kaJon Entine's Genetic Literacy Project: Izithunywa ze-PR zeMonsanto, iBayer kanye neMboni Yamakhemikhali (2018)
UTamar Haspel ubadukisa kanjani abafundi beWashington Post futhi ukubuyekeza umthombo wamakholomu we-Haspel wezibulala-zinambuzane (2018)
Inkampani yaseRussia eyayiyi-PR uKetchum uqhuba imboni yamakhemikhali i-PR salvo kwi-GMO (2015)
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, izibulala-zinambuzane Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, ag biotech, Bayer, I-CBI, Umkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology, ICropLife International, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, Inhlangano Yomlimi Yomhlaba Wonke, Izimpendulo ze-GMO, UKetchum, Monsanto, UTamar Haspel
Ukulandelela Inethiwekhi Yezimboni Yezimboni Eziphathelene Nezibulala-zinambuzane
Posted on June 2, 2020 by UStacy Malkan
Izinkampani ezine kuphela manje ezilawula ngaphezu kuka-60% wokuphakelwa komhlaba wembewu nezibulala-zinambuzane. Ukwengamela umphakathi ngemisebenzi yabo kubalulekile ekutholeni ukudla okuphephile nokunempilo. Kodwa-ke zonke lezi zinkampani - iMonsanto / Bayer, iDowDuPont, iSyngenta, i-BASF - zinde imilando yokufihla ingozi kwemikhiqizo yabo. Njengoba amarekhodi abo engakhuthazi ukwethenjwa, bathembele kubalingani benkampani yangaphandle ukukhuthaza nokuvikela imikhiqizo yabo.
Amashidi eqiniso ngezansi akhanya kule nethiwekhi ye-propaganda efihliwe: amaqembu angaphambili, izifundiswa, izintatheli kanye nabalawuli abasebenza ekusithekeni nezinkampani zokubulala izinambuzane ukukhuthaza nokuvikela ama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane.
Imininingwane esiyibika lapha isuselwa kuphenyo lwe-US Right to Know oluthole amashumi ezinkulungwane zamakhasi emibhalo yangaphakathi yezinkampani nezomthetho kusukela ngonyaka wezi-2015. Uphenyo lwethu lukhuthaze umkhankaso wokuphikisana nomkhakha wezibulala-zinambuzane ozame ukudicilela phansi umsebenzi wethu. Ngokuvumelana ne Imibhalo yeMonsanto ivezwe ngo-2019, "Uphenyo lwe-USRTK luzoba nomthelela kuyo yonke imboni."
Sicela wabelane ngalawa maqiniso, futhi bhalisa lapha ukwamukela izindaba ezivela ekuphenyweni kwethu.
Ukubuyekezwa Kwezifundiswa: ukwenziwa kweqembu langaphambili leMonsanto
I-AgBioChatter: lapho izinkampani nezifundiswa behlela isu kuma-GMO kanye nemithi yokubulala izinambuzane
U-Alison Van Eenennaam: isikhulumi sangaphandle esingukhiye kanye nommeli wezokuvikela embonini yezolimo kanye neye GMO
Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo iyiqembu eliphambili lenkampani
Izinkampani zeBayer's Shady PR: UHillard noKetchum PR
Kwenziwe kabusha isiza imboni yamakhemikhali i-PR nemizamo yokunxenxa
Isikhungo Sobuqotho Bokudla ukudla kanye nemboni yezolimo abalingani be-PR
ICornell Alliance yeSayensi is a umkhankaso wobudlelwano bomphakathi eCornell ukukhuthaza ama-GMO
Umkhandlu Wezokwazisa nge-Biotechnology, Izimpendulo ze-GMO, iCropLife: Imboni yokubulala izinambuzane imizamo ye-PR
UDrew Kershen: umkhakha weqembu lezolimo ngaphambili ongumholi
I-Food Evolution GMO Idokhumentari ifilimu esakaza inkulumo-ze, kusho izifundiswa eziningi
UGeoffrey Kabat: izibopho zamaqembu ezimboni zikagwayi namakhemikhali
Ukuhlola kweGlyphosate Spin: ukulandelela izimangalo mayelana ne-herbicide esetshenziswa kakhulu
Izimpendulo ze-GMO is a Ukuphathwa kwezinkinga Ithuluzi le-PR lama-GMO kanye ne-pesticides
UHank Campbell i-maze yamabhulogi esayensi athanda iMonsanto
UHenry I. Miller kwehliswe yiForbes ngehlazo lokubhala ngemiphefumulo leMonsanto
Inkundla Yabesifazane Ezimele: Iqembu elixhaswa ngemali nguKoch livikela izibulala-zinambuzane, uwoyela, izimboni zikagwayi
I-International Food Information Council (IFIC): Ukuthi iBig Food iziphotha kanjani izindaba ezimbi
I-International Life Sciences Institute (ILSI) iyiqembu lokwamukela izimboni zokudla, imibhalo ikhombisa
UJay Byrne: hlangana nendoda engemuva komshini weMonsanto PR
UJon Entine, Iphrojekthi Yokufunda Ngofuzo: izithunywa ezibalulekile zeMonsanto, iBayer kanye nemboni yamakhemikhali
UKeith Kloor: ukuthi intatheli yesayensi isebenze kanjani nabalingani bemboni ekusithekeni
UKevin Folta izimangalo ezilahlekisayo nezikhohlisayo
UMark Lynas weCornell Alliance weSayensi amaphromoshini akhohlisayo futhi anganembile nge-ajenda yezentengiselwano yomkhakha wezolimo
IMonsanto yaqamba laba "abalingani bemboni" kuyo Uhlelo lwe-PR lokubhekana nesinqumo somdlavuza we-glyphosate (2015)
UNina Federoff yagqugquzela igunya lesayensi yaseMelika ukusekela iMonsanto
UPamela Ronald's izibopho emaqenjini angaphambili embonini yamakhemikhali
UPeter Phillips kanye nezihlobo zakhe uchungechunge oluyimfihlo "lwelungelo lokwazi" e-University of Saskatchewan
SciBabe uthi udle izibulala-zinambuzane zakho, kepha ngubani omkhokhelayo?
Isayensi Media Center ithuthukisa imibono yenkampani yesayensi
Umuzwa Ngezesayensi / IZITATIMENDE spin isayensi embonini
UStuart Smyth imboni yezolimo izibopho kanye nezimali
UTamar Haspel idukisa abafundi beWashington Post kumakholamu akhe okudla
I-Val Giddings: i-BIO VP yangaphambili iyinkampani esebenza kakhulu embonini yezolimo
Amashidi eqiniso angaphezulu ngamaqembu aphambili angaphambili, amaqembu ezohwebo nababhali be-PR:
I-BIO: iqembu lokuhweba lomkhakha we-biotech
Isikhungo Senkululeko Yabathengi
Izitshalo Zokuphila Zomhlaba Wonke
I-International Life Sciences Institute
UKavin Senapathy / MAMIzinganekwane
I-US Farmers and Ranchers Alliance
Izinsiza Ezengeziwe ezivela e-US Right to Know
Izifundo zezifundo ezibhalwe kabusha yi-US Right to Know
Amaphepha eMonsanto: Ingobo yomlando wedokhumenti ye-Roundup / Glyphosate
Ingobo yomlando wedokhumenti ye-Dicamba
I-Roundup ne-Dicamba Trial Tracker blog olusha njalo
Ishidi lamaqiniso leGlyphosate: Ukukhathazeka Kwezempilo Mayelana ne-Pesticide Esetshenziswa Kakhulu
Ishidi lamaqiniso lakwaDicamba
Ukusabalala kwezindaba zomhlaba wonke ze Ukutholwa kwe-US Right to Know
Uma uthanda umsebenzi wethu, sicela QHAFAZA LAPHA ukusisiza sikhuphule ukushisa kuphenyo lwe-USRTK.
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, U-Alison Van Eenennaam, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, Bayer AG, Kwenziwe kabusha, Isikhungo Sobuqotho Bokudla, ICornell Alliance yeSayensi, UDrew Kershen, UmnumzanaHillard, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, UGeoffrey Kabat, Izimpendulo ze-GMO, Hank campbell, Henry Miller, IFIC, Inkundla Yabesifazane Ezimele, IMF, UJon Entine, I-Ketchum PR, UKevin Folta, UMark Lynas, Monsanto, Sci Babe, Umuzwa Ngezesayensi, IZIBALO, UTamar Haspel, I-Val Giddings
UNina Fedoroff: Ukugqugquzela igunya lesayensi yaseMelika ukubuyisela iMonsanto
Posted on June 18, 2019 by UStacy Malkan
Njengomongameli nosihlalo webhodi le-AAAS kusuka ngo-2011-2013, uDkt Fedoroff uthuthukise izinhloso zenqubomgomo yomkhakha wezolimo. Manje usebenzela inkampani yezikhalazo.
Imibhalo etholwe yi-US Right to Know ikhombisa ukuthi ubudlelwane bomphakathi kanye nemizamo yokunxenxa kuhlanganiswa kanjani ekusithekeni phakathi kwemboni yezolimo, amaqembu angaphambili kanye nezifundiswa ezibonakala zizimele.
UNina Fedoroff, i-PhD, ungomunye wososayensi abanethonya elikhulu abalwela ukwanda nokuncishiswa kokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo. Ungumongameli wangaphambilini we-American Association for the Advancement of Science (2011-2012) futhi owayengusihlalo we-AAAS Board of Directors (2012-2013). Ungu- umeluleki omkhulu wesayensi kusukela ngo-2015 e-OFW Law, inkampani yokubamba iqhaza lapho amaklayenti afakiwe Syngenta futhi Umkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology, iqembu lokuhweba elimele iBayer (engumnikazi weMonsanto), iBASF, iCorteva (isigaba seDowDuPont) neSyngenta.
Kusukela ngo-2007-2010, uDkt Fedoroff wasebenza njengomeluleki wesayensi nobuchwepheshe kuNobhala Wezwe kanye noMphathi we-USAID ngaphansi kokuphathwa kukaGeorge W. Bush kanye no-Obama. Ngaphambi kwalokho, wayengu- ilungu lebhodi we-Sigma-Aldrich Corporation, inkampani yamakhemikhali yamazwe ngamazwe kanye ne-biotech; kanye ne Ilungu lebhodi elelulekayo ye-Evogene, inkampani ye-biotechnology esebenzisana nayo DuPont, Syngenta, Bayer futhi Monsanto.
Umcimbi wango-2017 wokukhangisa uMkhandlu WaseMelika Wezesayensi Nempilo Incwadi ethi “junk science” kufakwe uDkt Fedoroff futhi ososayensi ababili abahambisana namaqembu aphika isayensi yezulu.
NjengoNobhala Wezwe uHillary “Umbusi wesayensi kaClinton, "UDkt Fedoroff wasebenza njengonozakuzaku we"GMO yonke indlela”Ngenqubomgomo yaseMelika yezangaphandle, uTom Philpott wabika eGrist ngo-2008 nango-2009. I-Pesticide Action Network yaseNyakatho Melika ichaze uDkt. Fedoroff ngokuthi“inxusa laseMelika ngokoqobo ”lobunjiniyela bezakhi zofuzo. Ngokusho kukaGreenpeace, uDkt. Fedoroff ube “a ummeli oshisekayo wokwanda komhlaba jikelele kweGM ukudla (okushintshwe izakhi zofuzo) kuwo wonke umsebenzi wakhe. ”
Ngesikhathi sakhe sokuba ngumongameli nosihlalo we-AAAS, i ngobukhulu emhlabeni umphakathi wesayensi eyahlukahlukene, uDkt Fedoroff waqokomisa lezo zindima ukuhlinzeka ngosizo lwezepolitiki embonini yezolimo: isibonelo, i-AAAS Board of Directors ngaphansi kukasihlalo wayo yakhipha isitatimende esasibekelwe isikhathi sezepolitiki sokuphikisana nokufakwa kophawu lweGMO ngonyaka ka-2012. Ngenkathi engumongameli wenhlangano yesayensi ngo-2011. , UDkt Fedoroff usize ukwehlula isiphakamiso se-EPA sase-US ebesizodinga imininingwane eyengeziwe yezempilo nokuphepha yezitshalo ze-GMO, ngokusho kwama-imeyili achazwe ngezansi. Bheka, UNina Fedoroff, i-AAAS kanye nomkhakha wezobuchwepheshe bezolimo. UDkt Fedoroff ne-AAAS abaphendulanga ezicelweni zempendulo.
Ukuhlangana namaqembu aphambili embonini ekhohlisayo nemizamo ye-PR
UDkt Fedoroff ukhuthaze futhi wasiza ukwenza ngokusemthethweni amaqembu athi angamazwi azimele esayensi kepha asebenza ngasese nemboni yezolimo ngezindlela ezidukisa umphakathi - kufaka phakathi amaqembu amabili asiza iMonsanto zama ukwehlisa isithunzi ososayensi abasebenza ophikweni lochwepheshe beWorld Health Organisation's International Agency for Research on Cancer (IARC) oluchaza i-glyphosate njenge kungenzeka i-carcinogen yomuntu e 2015.
Umkhandlu WaseMelika Wezesayensi Nempilo (ACSH) uxhaswa ngu izinkampani zamakhemikhali, ezithaka imithi kanye nogwayi, ngokuvumelana ne kudalulwe imibhalo yangaphakathi lowo mbhalo wokuthi iqembu lizifaka kanjani izinsizakalo zalo ezinkampanini ngemikhankaso yokuvikela umkhiqizo. Ama-imeyili akhishwe ngezinqubo zenkantolo akhombisa ukuthi iMonsanto bavuma ukuxhasa i-ACSH ku-2015, futhi ucele iqembu ukuthi libhale ngalo umbiko womdlavuza we-IARC nge-glyphosate; I-ACSH ngokuhamba kwesikhathi bathi umbiko womdlavuza wawungowokukhwabanisa okungokwesayensi.
UDkt Fedoroff usize ukukhuthaza leli qembu njengomthombo osemthethweni wesayensi ku-2017 Umcimbi weNational Press Club ukwethula i-ACSH's “Little Black Book of Junk Science” Ababebonakala eceleni kukaDkt Fedoroff emcimbini wabezindaba bekungososayensi ababili abaxhumene namaqembu athi ukuphika isayensi yezulu futhi ukunxenxa imikhiqizo kagwayi:
U-Angela Logomasini, PhD, ungumuntu ophakeme ku-Koch oxhaswe ngemali Inkundla Yabesifazane Ezimele futhi Ukuncintisana Kwebhizinisi Isikhungo. Yena uthi ukuthi i ubufakazi obukhulu besayensi ukuxhumanisa i-chlopyrifos ne ukulimala kwengqondo ezinganeni “iyisayensi engenamsebenzi.”
Alan Moghissi, PhD, owayeyisikhulu se-EPA, uyasekela izinhlangano eziningana lowo mbuzo ushintsho lwesimo sezulu olwenziwe umuntu. Usebenze ebhodini lokweluleka le- Intuthuko Yokubumbana Kwesayensi Yomsindo (TASSC), iqembu langaphambili likaPhilip Morris elazama ukudicilela phansi ucwaningo mayelana nobungozi bezempilo kagwayi.
Iphrojekthi Yezofuzo: UDkt Fedoroff ubaliwe njengelungu lebhodi kuwebhusayithi ye-Genetic Literacy Project, iqembu elithi lizimele kodwa abalingani neMonsanto kumaphrojekthi we-PR kanye nokunxenxa, ngokwemibhalo etholwe yi-US Right to Know. Imibhalo ekhishwe ekufayweni kwenkantolo ibonisa ukuthi iMonsanto ibhale leli qembu phakathi kwe- "Abalingani bemboni" behlela ukuzibandakanya nesu lokuhlela "ukukhala" ngokuhlolwa kwe-IARC kwe-glyphosate ukuze "kuvikelwe isithunzi ne-FTO ye-Roundup." IGenetic Literacy Project selokhu yathumela okungaphezulu kwe- Izihloko ze-200 egxeka i-ejensi yocwaningo lomdlavuza, kufaka phakathi ukuhlaselwa komuntu siqu kososayensi ababandakanyeka embikweni we-glyphosate, ebasola uzungu, ukukhwabanisa, elele, inkohlakalo, imfihlo, nokukhuthazwa “inzuzo nokuyize. ”??
Ku-an uchungechunge lokuwina imiklomelo eLe Monde mayelana "nemizamo kaMonsanto yokucekela phansi i-UN ejensi yomdlavuza nganoma iyiphi indlela," izintatheli uStéphane Foucart noStéphane Horel bachaze iGenetic Literacy Project ne-ACSH "njengamawebhusayithi aziwa kakhulu enkulumo-ze" futhi bathi i-GLP "idliswa ngabantu be-PR abaxhumene izimboni zezibulala-zinambuzane ne-biotechnology. ” I-GLP yethulwe ngo-2011 nguJon Entine, onenkampani yezobudlelwano nomphakathi eyayineMonsanto njengekhasimende ngaleso sikhathi.
Ukuhlaselwa kwabaphenyi bomdlavuza kuwebhusayithi ye-Genetic Literacy Project ebala uDkt Fedoroff "njengelungu lebhodi":
Ukubuyekezwa Kwezifundiswa: UDkt Fedoroff ukhuthaze ukubuyekeza kwe-Academics njengomthombo wesayensi onokwethenjelwa esihlokweni sango-2012 ku Amathrendi ku-Genetics kanye nengxoxo ye-2016 ne-Washington Examiner mayelana ubuntatheli besayensi obumpofu. Imibhalo etholwe yi-US Right to Know ikhombisa ukuthi ukubuyekezwa kwezifundo kwakungu usethe njengeqembu langaphambili ngosizo lweMonsanto ukudicilela phansi abagxeki bobunjiniyela kanye nezibulala-zinambuzane, ngenkathi ukugcina izigxivizo zeminwe zenkampani zifihliwe. Iqembu, okuyi bathi ukuzimela kodwa kwaba uxhaswe yizinkampani zezolimo, ahlasele imboni yezimboni “njengomkhonyovu wokumaketha.”
Ikamu leBiotech Literacy Boot Camp: UDkt Fedoroff wabalwa ohlwini lwe- ilungu lobuchwepheshe obuyisisekelo we-Biotech Literacy Project “camp boot” owawubanjelwe e-UC Davis ngo-2015. Lo mcimbi wawuhlelwe ngamaqembu amabili e-PR, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project futhi Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, futhi uxhaswe ngasese yizinkampani zezolimo ukuze “aqeqeshe ososayensi nezintatheli ukuhlela impikiswano ngama-GMO nobuthi be-glyphosate,” kubika uPaul Thacker ku-Okuqhubekayo. Izipikha zifake uhlu olujwayelekile lwabalingani bemboni ye-PR kubandakanya UJay Byrne, UJon Entine, UBruce Chassy, ​​uDavid Tribe, UHank Campbell we-ACSH futhi I-keynote by “iSci Babe.”
I-AgBioWorld: Ku-2012 Trends and Genetics wakhe esihlokweni, UDkt. Fedoroff wakhuthaza iwebhusayithi i-AgBioWorld ngokuthi “enye insiza eyigugu” yokufunda ngesayensi. Ngo-2002 ku-Guardian, UGeorge Monbiot uchaze ukuthi ithimba le-PR leMonsanto lisebenzise kanjani iwebhusayithi ye-AgBioWorld nama-akhawunti enkohliso ezokuxhumana nabantu ukuhlambalaza ososayensi nabezemvelo abaphakamise ukukhathazeka ngezitshalo zeGM. UMonbiot ubike:
“Ekupheleni konyaka odlule, uJay Byrne, owayengumphathi [weMonsanto] wezokuxhumana nge-internet, wachazela amanye amafemu amaqhinga ayewasebenzisile eMonsanto. Ukhombise ukuthi, ngaphambi kokuthi aqale ukusebenza, izingosi eziphezulu ze-GM ezibalwe yinjini yokusesha kwi-inthanethi zonke zazigxeka ubuchwepheshe. Ngemuva kokungenelela kwakhe, izingosi ezisezingeni eliphezulu zonke bezingabasekeli (ezine zazo ezisungulwe yinkampani yakwaMonsanto's PR Bivings). Ubatshele ukuthi 'bacabange nge-intanethi njengesikhali esisetafuleni. Kuphakathi kokuthi uyayicosha noma umuntu oyincintisana naye uyayithatha, kodwa kukhona umuntu ozobulawa. '
Ngenkathi esebenzela iMonsanto, uByrne utshele iphephandaba le-inthanethi ukuthi Wow ukuthi 'usebenzisa isikhathi sakhe nomzamo wakhe ukubamba iqhaza' ezingxoxweni zewebhu mayelana ne-biotech. Ukhombe indawo i-AgBioWorld, lapho 'eqinisekisa ukuthi inkampani yakhe idlala khona kahle.' I-AgBioWorld yisiza lapho [umlingisi mbumbulu online uMary] Smetacek aqala khona umkhankaso wakhe. ”
Ukuhlaselwa ku-Greenpeace: UDkt Fedoroff wakhuluma ku umcimbi wokucindezela we-2016 weqembu elizibiza “Sekela i-Precision Agriculture, ”Ebethula incwadi esayinwe ngabaklonyelizi bezindondo abangaphezu kwekhulu beNobel begxeka iGreenpeace ngokungahambisani kwabo namaGMO. Ababambisene nomkhakha wezolimo usizile ngomkhankaso, kufaka phakathi owayenguMqondisi Wezokuxhumana kaMonsanto UJay Byrne; iqembu langaphambili lokuhweba nge-biotech VP I-Val Giddings; noMat Winkler, oxhasa imali nge- Iphrojekthi ye-PR ye-Genetic Literacy Project futhi ibhalwe njenge- ilungu lebhodi kanye noDkt Fedoroff kuwebhusayithi yeqembu. Uhlobo lwe- .com lwewebhusayithi okuthiwa izimele ye- “Support Precision Agriculture” iqondiswe kabusha kwi-Genetic Literacy Project iminyaka (yahlukaniswa ngemuva kokuthi siyinake ku-2019). Ku- ama-imeyili avela ku-2011, U-Byrne wakhomba i-Greenpeace ohlwini lwama "target" ayelwenzela iMonsanto enamagama abagxeki bezimboni ababengabhekana nabo ngemuva kwekhava iqembu lezemfundo elixhaswe ngezimboni lokho kwavela ngokuzimela.
Umngani we GMO Izimpendulo: UDkt Fedoroff uyi isazi esizimele Izimpendulo ze-GMO, a Umkhankaso we-PR owenziwe ubudlelwano bomphakathi kaKetchum, ene-a umlando wokusebenzisa amaqhinga akhohlisayo ukuthonya umphakathi. Yize uKetchum ebanga umkhankaso weZimpendulo ze-GMO 'kungachaza kabusha okwenzekayo,' iqembu izimpendulo ezibhaliwe ngochwepheshe "ozimele" futhi wabalwa phakathi "kwabalingani bemboni" ku Uhlelo lukaMonsanto lwe-PR ukuvikela i-Roundup ekukhathazekeni komdlavuza. A Isigaba "sezinsizakusebenza" (ikhasi 4) sikhombe kwizixhumanisi zeGMO Answers kanye neMonsanto ezixhumana nomyalezo wenkampani othi "IGlyphosate akuyona i-carcinogenic." Ngo-2016, UDkt Fedoroff ukhulume ngesigungu esixhaswe ngabakwa-GMO Answers, Scientific American kanye ne ICornell Alliance yeSayensi mayelana nokusakazwa kwabezindaba kwesayensi equkethe izintatheli ezinobungani embonini UKeith Kloor futhi UTamar Haspel. Bona “IMedia Machine yeMonsanto Iza eWashington, ”NguPaul Thacker.
Uphenyo oluphikisayo lokuthola ubudlelwane bemboni nezifundo
Ku-2015, uDkt Fedoroff nabanye abaongameli ababili be-AAAS, uPeter Raven noPhillip Sharp, bathuthukisa izindima zabo zobuholi be-AAAS, kepha behlulekile ukudalula noma yikuphi ukubambisana kwabo embonini, ku-Guardian i-op-ed ophikisana nophenyo lwamarekhodi womphakathi obefuna ukuthola ubudlelwano obungadalulwanga nezinhlelo zezimali phakathi kwezinkampani zezolimo, amaqembu abo e-PR kanye noprofesa abaxhaswe umphakathi. I- uphenyo olwenziwe yi-US Right to Know wembule eminye yemibhalo esemqoka echazwe kuleli qiniso.
Yize uGuardian kamuva engeze i- ukudalulwa ukuthi uDkt Fedoroff usebenza enkampanini yokwamukela izivakashi i-OFW Law, akuzange kudalule lokho Iklayenti le-OFW Law ngaleso sikhathi kwakuyiqembu lezokuhweba lezimboni zezolimo, izinkampani zalo ezingamalungu ezazigxile ekuphenyweni kwamarekhodi omphakathi. Omengameli bangaphambilini be-AAAS baphikisana nohlelo lwabo lokuthi uphenyo lokuthola ukungqubuzana kwezintshisekelo ezingadalulwanga embonini nezifundo "lwalukhipha ikhasi encwadini yokudlala yeClimategate" futhi luthinta "ukuphika isayensi," izimangalo ezifanayo enziwe yizimboni amaqembu e-PR achazwe kuleli qiniso.
Kusetshenziswa i-AAAS ukuqhubekisela phambili izinhloso zenqubomgomo yomkhakha wezolimo
Ngesikhathi sakhe sokuba ngumongameli we-American Association for the Advancement of Science (AAAS) kusuka ngo-2011-2012 nanjengoSihlalo weBhodi Yabaqondisi kusukela ngo-2012-2013, uDkt Fedoroff wasebenza nabalingani bemboni yezolimo ukuthuthukisa izinhloso zenqubomgomo ezisemqoka: ukugcina izakhi zofuzo ukudla okwenziwe ngobuchwepheshe kungabhalwanga futhi kwehliswa isiphakamiso se-US Environmental Protection Agency ebesizodinga imininingwane eyengeziwe ngemithelela yezempilo nezemvelo yezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo ezihlukaniswa njengezibulala-zinambuzane.
I-AAAS isize ukuncenga abavoti ukuthi baphikise ukufakwa ilebuli kwe-GMO
Ngo-2012, iBhodi Labaqondisi be-AAAS ngaphansi kukaSihlalo kaDkt Fedoroff yathatha isinyathelo esingajwayelekile sokuthatha uhlangothi odabeni lwezepolitiki olunombango kusasele amasonto amabili ngaphambi kokuba abavoti eCalifornia baye okhethweni lokuthatha isinqumo ngeProposition 37, okuyisinyathelo sokuvotela ama-GMO. Ukubuyekezwa kwezitatimende eziningi zezepolitiki ezenziwe yi-AAAS azitholanga ezinye izibonelo zenhlangano eyayizama ukuthonya abavoti ngaphambi kokhetho lombuso. (I-AAAS noDkt. Fedoroff abaziphendulanga izicelo zokubeka imibono. Futhi ukudalulwa: abaqondisi abasebenzisana ne-USRTK basebenze emkhankasweni wokufaka ilebula.)
Amabhodi we-AAAS isitatimende Ukuphikisa ilebula le-GMO kwakuyimpikiswano. It kuqukethe ukunganembi, ngokusho kwamalungu esikhathi eside e-AAAS, amaningi awo usilahlile isitatimende esiphikisana nokulebula njengokuhlasela “kobaba” kwamalungelo abathengi okudukise umphakathi ngokushiya umongo obalulekile wesayensi nokulawula. Okhulumela i-AAAS ngaleso sikhathi, uGinger Pinholster, wabiza ukugxekwa ngokuthi “akulungile futhi akunankinga.” Utshele intatheli ubesekamelweni ngesikhathi ibhodi lidlulisa isitatimende: “Asilona iqembu labameli. Izitatimende zethu sizenza ngokuya ngobufakazi besayensi, ”kusho uPinholster. "Ngingakutshela ukuthi isitatimende sethu asiwona umsebenzi noma asithonywanga yinhlangano engaphandle."
Abanye izingqapheli baqaphela ukufana kolimi olusetshenziswa yi-AAAS ne- umkhankaso oxhaswa ngezimboni ukwehlula isiphakamiso 37. "Ngabe iqembu elikhulu lesayensi liyayilahla iMonsanto?”Kubuza uMichele Simon ngoGrist. USimon uchaze isitatimende sebhodi "njengesingeyona isayensi kepha esifanele kakhulu ukucaphuna," futhi waphawula ukuthi ukukhishwa kwabezindaba kwe-AAAS ibiqukethe "amaphuzu okuxoxa" ahambisana no-No on 37 izincwadi zomkhankaso.
"Ukubonakala ungaphansi kokusobala kungumqondo omubi ngempela emphakathini wezesayensi"
Phakathi ku Incwadi ka-2013 eya kumagazini weSayensi, elinye iqembu lososayensi abali-11 lizwakalise ukukhathazeka ngokuthi isitatimende sebhodi le-AAAS ngokudla okuyi-GMO "singahle siqhume." Babhala bathi, “sikhathazekile ukuthi isikhundla se-AAA simele indlela engenalo ulwazi lokuxhumana nesayensi… ukubonakala kungabonakali obala kuwumqondo omubi ngempela emphakathini wesayensi. ”
UDkt. ososayensi abane abamele "umphakathi wesayensi nowezemfundo" ophikisana nokulebula kwe-GMO. Umkhankaso ngokuhamba kwesikhathi wacela uDkt Fedoroff ukuthi asize ekufuneni izifundiswa ezengeziwe emgomweni wazo, lokho wakwenza ngokusho kuka Okthoba 1, 2012 imeyili kuMeghan Callahan we-BCF Wezindaba Zomphakathi, “Ngidlulisele [isicelo sakho sabaxhasi bezemfundo] eqenjini lamazwe omhlaba le-biotechnology elisekela izifundiswa. Ngiyasola ukuthi uzobe uzwa ezingxenyeni eziningi zomhlaba, ”kubhala uDkt Fedoroff.
Kusize ukubulala izidingo zedatha yezitshalo ezikhiqiza izibulala-zinambuzane
Ngo-2011 ngenkathi esebenza njengoMongameli we-AAAS, uDkt. Fedoroff wasebenza nabalingani bemboni yezolimo kanye nomuntu osebenzela izimboni ukumisa i-US Environmental Protection Agency ekudingeni izinkampani ukuthi zinikeze imininingwane eyengeziwe yezempilo nokuphepha yokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo okuhlukaniswa njengezibulala-zinambuzane, ngokusho kwama-imeyili kuchazwe ngezansi.
Isiphakamiso se-EPA sisuselwe engxoxweni yePhaneli Elulekayo Yezesayensi ye-EPA yango-2009 mayelana izindlela zokwenza ngcono ikhono le-ejensi lokwenza izinqumo ezilawulayo mayelana nezitshalo ezenzelwe izakhi zofuzo ukukhiqiza noma ukuqukatha izibulala-zinambuzane, i-EPA eyibiza ngokuthi "izivikeli ezifakwe ezitshalweni" (ama-PIP). Amalungu ePhaneli acelwe ukuthi ahlole izidingo zamanje neziphakanyiswayo zedatha ye-EPA yama-PIP kulezi zindawo ezilandelayo:
idatha yokuhlola ukufana okukhona phakathi kwama-PIP nama-allergen, ubuthi, ama-anti-nutrient namanye amaprotheni ayingozi;
ukuhlolwa kwemiphumela ehambisanayo kwezempilo nakwizinto ezingezona ezihlosiwe, lapho izici ezimbili noma ngaphezulu ze-GMO zihlanganisiwe (istacked trait GMOs);
imithelela engahle ibe khona kubantu abancane bezinto eziphilayo emhlabathini; futhi
idatha yokubhekana kangcono nemithelela yokugeleza kofuzo.
Ngokuvumelana ne amanothi avela emhlanganweni we-EPA ka-Okthoba 2009, imithetho ehlongozwayo "izodidiyela kakhulu izidingo zedatha ezikhona ezisetshenziswa njengamanje," futhi izofaka imikhakha emihlanu yedatha nolwazi: ukwenziwa komkhiqizo, impilo yabantu, imiphumela engahlosiwe, ukuphela kwemvelo nokumelana ukuphathwa. I-EPA umemezele imithetho ehlongozwayo kwiRejista Yenhlangano ngo-Mashi 2011.
Ama-imeyili atholwe yi-US Right to Know ngezicelo zamarekhodi womphakathi akhombisa ukuthi izimbangi zomfelandawonye zahlangana kanjani ukunqoba lesi siphakamiso.
Ama-imeyili akhombisa izingxoxo phakathi kukaBruce Chassy, ​​uprofesa wase-University of Illinois ngaleso sikhathi, u-Eric Sachs waseMonsanto nabanye abasebenza embonini bexoxa ngemisebenzi nangemihlangano ebandakanya uDkt Fedoroff. UChassy uzichaze kuma-imeyili (ikhasi 66) njengokuxhumana phakathi kwemboni nezifundiswa emzameni wokuphikisana nezidingo zedatha ye-EPA. Okufakwe kuma-imeyili akhe kuSachs bekukhona imibuzo yokuthi ngabe uMonsanto uthumele isheke yini e-University of Illinois Foundation ukuxhasa umsebenzi kaChassy “wokufinyelela kwe-biotechnology kanye nemisebenzi yezemfundo.” (Ngemininingwane engaphezulu ngezimali ezingadalulwanga uChassy azithola eMonsanto iminyaka njengoba ethuthukisa i-biotechnology, bheka kubika nguMonica Eng eWBEZ futhi ama-imeyili athunyelwe yiNew York Times.)
NgoJulayi 5, uDkt Chassy uthumele i-imeyili u-Eric Sachs waseMonsanto ukubika ukuthi uDkt Fedoroff uthumele i- incwadi eya ku-EPA ngaphezulu kwesiginesha yakhe esayinwe ngokubambisana ngamalungu angama-60 eNational Academy of Sciences. “UNina ulicoshe ibhola walisusa phansi enkundleni,” kubhala uChassy. Uchaze isiphakamiso se-EPA “njengokuphahlazeka kwesitimela.”
Ama-imeyili akhombisa ukuthi ngo-Agasti 19, abamele amaqembu ezokuhweba embonini babe umangele futhi wajabula (ikhasi 19) ukubona i-New York Times i-op-ed kusuka kuDkt. Fedoroff ephikisana nemithethonqubo yobunjiniyela bezakhi zofuzo; “Ngubani owenze isikhundla sikaNina?” U-Adrienne Massey we-BIO ubuze uDkt Chassy nabanye ababambisene naye embonini, Henry Miller futhi I-Val Giddings. UChassy uphendule wathi:
UMassey udlulisele uDkt Chassy incwadi i-BIO ayithumele ku-EPA “enethemba lokuthi uzokwakhela encwadini yezifundiswa futhi anqamule noma yikuphi ukuphendulwa kwe-EPA kuleyo ncwadi.” Imizamo yabo ayiphumelelanga njengoba bebethemba. Ngo-Agasti 24, UDkt Chassy ubhalele u-Eric Sachs (ikhasi 14) ukuthi uDkt. Fedoroff “uthole impendulo evela ku-EPA eyinhlamba.” Uchaze izinhlelo zokuqinisa ingcindezi.
NgoSepthemba, uChassy uhlele ucingo lwengqungquthela noFedoroff, u-Eric Sachs weMonsanto, u-Adrienne Massey we-BIO kanye no-lobbyist wabo uStanley Abramson, phakathi kwabanye. Ngokusho kukaChassy amanothi asocingweni, "Ukuthola indlela yokuqinisekisa ukuthi isiphakamiso se-EPA asikaze sibone ukukhanya kosuku kungaba umphumela omuhle kakhulu esingalindela wona. Okulandelayo okuhamba phambili kuzoba ukuqinisekisa ukuthi yi-DOA, kodwa uma kunesidingo kumele sizimisele ukuqhubeka nokulwa. ”
Wabuye wabelana ngenkinga yokuthi, “I-EPA ayikholwa ukuthi umphakathi wezemfundo ungaphikisana ngokuqinile nomthetho wabo ohlongozwayo; bakholelwa ukuthi bambalwa kuphela abambalwa abalandela isicelo nokuthi iningi labasayinile abazinikele kulolu daba. ” Leli qembu linqume ukuthi lidinga “ukwakha umgogodla wososayensi abaholayo empeleni abazimisele ukukhuluma futhi banikele ngesikhathi kulolu daba.”
Ngo-Okthoba, iqembu lalinethemba kakhulu. UChassy wathumela i-imeyili ngamaSachs ukubika ngomhlangano "okhiqizayo ngokumangazayo" yena noDkt. Fedoroff bahambela noSteve Bradbury we-EPA. Umhlangano wawusungulwe nguMassey kanye no-Abramson owamukela izivakashi. Isiphakamiso se-EPA sokudinga imininingwane yama-GMO PIPs asikaze sikubone ukukhanya kosuku, ngokusho kukaMichael Hansen, PhD, usosayensi omkhulu we-Consumers Union, owabamba iqhaza emihlanganweni yomphakathi nale nhlangano.
Amaketanga e-imeyili aphelele, ngokusebenzisa Umtapo Wezincwadi Wezimboni we-UCSF:
"Ngavinjelwa engqungqutheleni yabezindaba yeNobel Laureate ngumxhumanisi we-PR noMonsanto Ties, ”NguTim Schwab, Food & Water Watch (2016)
"AbaPuppetmasters base-Academia, ”NguJonathan Latham, PhD, Independent Science News (2015)
"Eminyakeni engama-20 kamuva: iqembu le-biotech limasha, ”I-Pesticide Action Network (2012)
"Ukudla kwezobunjiniyela kukabani? ” ngu-Marcia Ishii-Eitemann, PhD, usosayensi omkhulu e-Pesticide Action Network North America (2011)
"Uxolo, NY Times: Ama-GMO namanje ngeke asindise umhlaba, ”Ngu-Anna Lappe, Grist (2011)
"Lapho ngiya khona uzwane nozakwabo wesayensi kaH. Clinton ngama-GMO, ”NguTom Philpott, Grist (2009)
"I-Diplomat Eguqulwe Ngokofuzo: Inqubomgomo Yezangaphandle yase-US i-GMO Yonke Indlela, ”NguTom Philpott, Grist (2008)
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu I-AAAS, Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, ACSH, U-Adrienne Massey, U-Alan Moghissi, Association American for the Ukuthuthukiswa Isayensi, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, U-Angela Logomasini, BASF, Bayer, Ikamu lokuqala le-Biotech Literacy Project, UBruce Chassy, Isikhungo Senkululeko Yabathengi, Ukuncintisana Kwebhizinisi Isikhungo, Corteva, Umkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology, UDavid Tribe, DowDuPont, U-Eric Sachs, U-Evogene, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, Iphini likajinja, glyphosate, GMO yonke indlela, Ukulebula kwe-GMO, Hank campbell, IARC, Inkundla Yabesifazane Ezimele, UJay Byrne, UJohn Entine, isayensi engenamsoco, UKeith Kloor, UKetchum, Incwadi Encane Emnyama Yesayensi Engafuneki, UMat Winkler, Monsanto, UNina Fedoroff, OFW Umthetho, UPeter Raven, UPhillip Sharp, I-PIP, inkosi yesayensi, I-Sigma-Aldrich Corporation, UStanley Abramson, USteve Bradbury, Syngenta, UTamar Haspel, Intuthuko Yokubumbana Kwesayensi Yomsindo, UC Davis, University of Illinois, I-Val Giddings
Iphrojekthi kaJon Entine's Genetic Literacy Project: Izithunywa ze-PR zeMonsanto, iBayer kanye neMboni Yamakhemikhali
Posted on October 7, 2018 by UGary Ruskin
UJon Entine ungumsunguli nomqondisi omkhulu we-Genetic Literacy Project, umlingani oqavile emizamweni yobudlelwano bomphakathi neMonsanto yokuvikela nokuvikela imikhiqizo yezolimo. U-Entine uziveza njengegunya lokulawula isayensi, kepha ubufakazi obuchazwe kuleli qiniso bukhombisa ukuthi usebenza isikhathi eside no-PR ngokuxhumana okujulile nemboni yamakhemikhali futhi uxhaso lwezimboni olungadalulwanga.
Umsuka weProjekthi ye-Genetic Literacy: inkampani yaseMonsanto PR futhi engenzi nzuzo enobudlelwano bakagwayi
U-Entine futhi ungumsunguli futhi uthishanhloko we-ESG MediaMetrics, inkampani yezobudlelwano bomphakathi eyayine IMonsanto njengeklayenti ngo-2011 lapho ifemu kubhaliswe igama lesizinda leGeneticLiteracyProject.org.
U-Entine ngaleso sikhathi wayeqashwa yiStatistical Assessment Services (STATS), iqembu elingenzi nzuzo izintatheli elizichaze njenge “umkhankaso we-disinformation" leyo "kwaziwa ukuthatha izikhundla ezivumela ukuvumelana okungokwesayensi noma ukuchitha ubufakazi obuvelayo bokulimala. ” IGenetic Literacy Project yathuthukiswa "njengohlelo lokuqondiswa kwezigwegwe olunama-STATS," ngokusho kuka izingobo zomlando zewebhu. Ngo-2015, i-Genetic Literacy Project yathutha ngaphansi kwesambulela seqembu elisha, iSayensi Literacy Project, elathola ifa le-STATS inombolo kamazisi wentela.
Uphenyo olwenziwe yiMilwaukee Journal Sentinel luthole ukuthi i-STATS ibiyi “umdlali omkhulu emkhankasweni wobudlelwano bomphakathi wokuhlambalaza ukukhathazeka nge-bisphenol A”Nokuthi inhlangano yabazali bayo, iCentre for Media and Public Affairs (CMPA),“ yayingu ikhokhwe ngeminyaka yama-1990 nguPhilip Morris, inkampani kagwayi, ukuze ihlukanise izindaba ezigxeka ukubhema. ” U-Entine wayengumqondisi we-CMPA ngonyaka wezimali ka-2014/2015, ngokusho kumafomu entela.
UMonsanto wayeyiklayenti lenkampani ye-Entine's PR ngenkathi ibhalisa isizinda seProjekthi Yokufunda Ngofuzo.
Ozakwethu neMonsanto kumaphrojekthi we-PR / ukuhlaselwa kososayensi
Imibhalo etholwe ngu I-US Ilungelo Lokwazi futhi kusuka icala elibhekene neMonsanto khombisa ukuthi i-Entine ne-Genetic Literacy Project bayasebenzisana neMonsanto ukukhuthaza nokuvikela ama-GMO kanye ne-pesticides, ngaphandle kokudalula ukusebenzisana kwabo:
Uhlelo lwe-Monsanto PR lwe-2015 ikhombe i-Genetic Literacy Project njengenye ye "Abalingani bemboni" IMonsanto ihlele ukuzibandakanya emizameni yayo "yokuhlela ukukhala" mayelana a umbiko womdlavuza kusuka ku-International Agency for Research on Cancer (IARC), ukuze "kuvikelwe isithunzi" seRoundup. I-GLP ithumele izindatshana ezingaphezu kwama-200 mayelana ne-IARC, eziningana zazo ukuhlaselwa ososayensi othole i-glyphosate carcinogenic njenge ukukhwabanisa futhi abaqambimanga abani kuqhutshwa inzuzo nokuyize.
Umklomelo Uphenyo lukaLe Monde mayelana "neMonsanto Papers" ichaze i-Genetic Literacy Project njenge- "webhusayithi eyaziwayo ye-propaganda" "enikezwa abantu be-PR abaxhumene nemithi yokubulala izinambuzane kanye ne-biotechnology," futhi yadlala indima enkulu emizameni kaMonsanto "yokuqeda umdlavuza weZizwe Ezihlangene ukuhlangana nanoma iyiphi indlela. ”
Ekugcwalisweni kwenkantolo ngo-2017, abameli babamangali abamangalela iMonsanto ngenxa yokukhathazeka ngomdlavuza we-glyphosate bachaze i-Genetic Literacy Project kanye ne-American Council on Science and Health ngokuthi “izinhlangano ezihlose ukuhlazisa ososayensi nokuqhakambisa imininingwane ewusizo eMonsanto nakwabanye abakhiqizi bamakhemikhali.”
Ngo-2014 nango-2015, i-Genetic Literacy Project isebenze neMonsanto nenkampani yabo ye-PR ukushicilela nokuphakamisa uchungechunge lwamaphepha e-pro-GMO abhalwe ngosolwazi ngaphandle kokudalulwa kwendima yenhlangano. Bona umbiko weBoston Globe, “Uprofesa waseHarvard wehlulekile ukudalula ukuxhumana kweMonsanto. "
Ngokwe-imeyili kaSeptemba 2014, Abaphathi beMonsanto bakhethe i-Genetic Literacy Project “njengendawo yokuqala” yokushicilela amaphepha oprofesa, nokwakha “uhlelo lokuthengisa” nenkampani ye-PR i-CMA ukukhuthaza amaphepha.
Inkampani i-PR i-CMA, eseyethiwe kabusha njenge-Look East, iqondiswa nguCharlie Arnot, naye ophethe i- Isikhungo Sobuqotho Bokudla, engenzi-nzuzo ethola uxhaso kuMonsanto - futhi inikela ku Iphrojekthi Yezofuzo.
Ngo-2014 nango-2015, i-Genetic Literacy Project ibambisene no Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, iqembu eliphambili leMonsanto, ukuhlela izingqungquthela ezixhaswa ngezimboni eYunivesithi yaseFlorida nase-UC Davis "ukuqeqesha ososayensi nezintatheli ukuhlela impikiswano ngama-GMO nobuthi be-glyphosate," njengo UPaul Thacker ubike kuThe Progressive.
Ixhumana neSyngenta / American Council on Science and Health
ISyngenta ibixhasa i-ACSH ngenkathi ishicilela incwadi ka-Entine ivikela umuthi wokubulala izinambuzane waseSyngenta.
UJon Entine uboshelwe eduze ne Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo (ACSH), iqembu eliphambili lenkampani lelo uthola imali evela eMonsanto nezinye izinkampani zamakhemikhali. I-ACSH ishicilele incwadi ka-Entine ka-2011, evikela i-atrazine, isibulala-zinambuzane esenziwe yiSyngenta. Ukubika kukaTom Philpott eMother Jones naseCentre for Media and Democracy kuqinisekisa ukuthi iSyngenta yayixhasa i-ACSH ngaleso sikhathi, nokuthi i-ACSH icele iSyngenta ukuthi inikeze ngezimali ezengeziwe zephrojekthi ebandakanya incwadi ezwakala njengencwadi ka-Entine.
Umbhalo kaPhilpott kuMama Jones uchaze izimo eziholele ekushicilelweni kwencwadi ka-Entine, ngokuya ngemibhalo etholwe ngu- Isikhungo Semidiya Nentando Yeningi lokho kuchaza umkhankaso weSyngenta PR ukuthola ababambisene naye abavela eceleni ukuvikela i-atrazine.
Ngo 2009, Abasebenzi be-ACSH babuze uSyngenta ngoxhaso lwama- $ 100,000 - “oluhlukile futhi oluhlukile kunokwesekwa kokusebenza okujwayelekile iSyngenta ibilokhu inikela ngokukhululeka eminyakeni edlule” - ukukhiqiza iphepha kanye "nencwajana elungele abathengi" mayelana ne-atrazine. Ngo-2011, I-ACSH imemezelwe Incwadi entsha ka-Entine kanye “nephepha lokuma elinomngane, elifushanisiwe,” zombili zivikela i-atrazine. U-Entine utshele uPhilpott ukuthi “akazi” ukuthi uSyngenta uxhasa i-ACSH.
Ingqikithi ebalulekile: ukuhlaselwa kososayensi nezintatheli
Indikimba ebalulekile emsebenzini ka-Entine ukuhlasela ososayensi nezintatheli ezibika ngokugxeka ngomkhakha wamakhemikhali, imboni kawoyela noma izinkinga zezempilo ezihambisana nazo. Ezinye izibonelo:
Liyahlaselwa New Yorker Intatheli uRachel Aviv ngomzamo wokwehlisa isithunzi sakhe ukubika ngemibhalo yangaphakathi yeSyngenta lokho kuveza ukuthi le nkampani yamakhemikhali izame kanjani ukonakalisa isithunzi sika-UC Berkeley uSolwazi Tyrone Hayes ngenxa yocwaningo lwakhe oluxhuma i-herbicide atrazine nezinkinga zokuzalwa zamaxoxo. Umthombo oyinhloko we-Entine kwakunguBruce Chassy, ​​uprofesa owayenguye ethola imali buthule kusuka eMonsanto futhi kwasiza ukuqala i- Iqembu eliphambili leMonsanto ukuhlasela abagxeki bezimboni.
Liyahlaselwa UProfesa waseHarvard uNaomi Oreskes, umbhali ngokubambisana we Abahwebi Ukungabaza, “njengoLuddite odumile, uRottweiler onobuhlakani obusebusweni bakho, ezemvelo, obabuxakayo ngokungadingekile ubuchwepheshe besimanje.”
Umangalelwe UMphathi weSikole Sobuntatheli saseColumbia uSteve Coll kanye nentatheli uSusanne Rust “wokugcoba i-Exxon” ngokubika ukuthi i-Exxon ibisazi iminyaka eminingi ukuthi ukushintsha kwesimo sezulu kuyiqiniso kepha ifihle isayensi ukugcina imali igeleza.
Phakathi ku ukuhlaselwa okulandelwayo (selokhu isuswe kufayela le- Huffington Post iwebhusayithi), u-Entine usole uRust wokwephula izimiso zokuziphatha ngokubika kwakhe ochungechungeni olwawina imiklomelo kwi-BPA okwakungu kufakwe kuhlu olufushane ngomklomelo wePulitzer; U-Entine akazange adalule ukuthi ukubika kwakhe kukhombe owayengumqashi wakhe i-STATS njenge- umdlali omkhulu emizameni ye-PR yomkhakha.
Umzila Wezezimali KaMurky wokungena ne-GLP
Umlando woxhaso lwe-Entine uyinkimbinkimbi futhi u-opaque, kepha imibhalo yentela nokudalulwa kwakhe uqobo kuveza iphethini yezimali ezivela emithonjeni engaziwa nasezisekelweni zamaphiko angakwesokudla ukususa ukwehliswa kwemithetho kanye nokwenqatshelwa kwesayensi yezulu, kanye nemali engadalulwanga evela embonini ye-biotechnology.
Inothi elicacile, eliguqula njalo "lokubonisa izinto obala"
Umbhalo othi “obala kwezezimali” kwiwebhusayithi ye-Genetic Literacy Project awunembile, ushintsha kaningi futhi kwesinye isikhathi uyaziphikisa. Ngo-2017 nango-2018, i-Genetic Literacy Project ithi ithola uxhaso kusuka kuzisekelo ezimbalwa kufaka phakathi izisekelo zeTempleton neSearle, okuyi abaxhasi abahola phambili bemizamo yokuphika isayensi yezulu. I-GLP ibuye ibhale uxhaso oluvela eCentre for Food Integrity, a iqembu lemboni yezokudla ethola imali evela kuMonsanto futhi ibuye isebenzisane neMonsanto ne-Genetic Literacy Project ukukhuthaza imboni yezolimo i-PR.
In Septhemba 2016, "ukudalulwa" Inothi lithe i-GLP ayitholanga mali ezinkampanini, kodwa iveze u- $ 27,500 "wokudlula" ovela ku- "Academics Review Charitable Association," okubukeka sengathi ayikho. Leli qembu ngokusobala Izifundo zeRegional.org, a iqembu langaphambili elathola uxhaso lwalo embonini yezolimo iqembu lokuhweba.
In Mashi 2016, i-GLP ayidalulanga ngezezimali futhi u-Entine wazama ukuqhela i-GLP kumqashi wakhe wangaphambili we-STATS, ethi i-STATS inikezela ngezinsizakalo zokubalwa kwezimali kuphela nokuthi amaqembu awabandakanyeki emisebenzini yomunye nomunye. Kodwa ngo-2012, i-GLP yathi “ithuthukiswe njengohlelo lokuqondiswa kwezigwegwe nge-STATS. "
Isikhungo Sezindaba Nezindaba Zomphakathi / IGeorge Mason University
Okonyaka wezimali 2014 / 2015, ngokuya ngamarekhodi entela, u-Entine wathola ama- $ 173,100 ngomsebenzi wakhe wokuba “umqondisi” eCentre for Media and Public Affairs, iqembu elizinze eGeorge Mason University futhi elasungulwa ngu-GMU Professor URobert Lichter. I-CMPA wakhokhelwa nguPhillip Morris ngawo-1990 ukwehlisa ukukhathazeka ngogwayi, ngokusho kwemibhalo ekwi-UCSF Library Industry Library.
I-CMPA ayidaluli abaxhasi bayo kepha ithole uxhaso ku-George Mason University Foundation, i umamukeli oholayo yeminikelo ehlangene neCharles Koch kanye neKoch Industries. I-GMUF iphinde yathola ama- $ 5.3 wezigidi kuDonors Trust nakwiDonors Capital Fund phakathi kuka-2011-13, ngokusho koMgcini. Lezi zimali zixhuma imali evela kubanikeli abangaziwa kufaka phakathi izinkampani emikhankasweni nasezifundweni eziphokophela izintshisekelo zemboni, njengoba iGreenpeace ikhombisile uphenyo olufihliwe.
Izinkokhelo ze-STATS nemalimboleko
Iqembu lodadewabo le-CMPA, nalo elasungulwa nguLichter futhi elizinze eGMU, kwakuyiStatistical Assessment Services (STATS), iqembu elingenzi nzuzo eladlala indima enkulu embonini yamakhemikhali emizamweni yokuvikela imikhiqizo enobuthi, ngokusho kokubika I-Intercept, I-Milwaukee Journal Sentinel, I-Atlantic futhi I-Consumer Reports.
Ngokuya ngamafomu e-IRS:
Ama-STATS akhokhelwe ukufaka u- $ 140,600 ku- 2012 / 2013 futhi $ 152,500 ku 2013 / 2014 “njengomxhumanisi ocwaningayo”
I-STATS kanye ne-Centre for Media and Public Affairs zombili zibhalise i-Entine njengoMqondisi ku 2014 / 2015 ngesinxephezelo se- $ 173,100. Amarekhodi entela awo womabili amaqembu abuye abala uMengameli uTrevor Butterworth ngama- $ 95,512 noMqondisi uTracey Brown ngaphandle kwesinxephezelo. UTracey Brown ungumqondisi weSense About Science, iqembu futhi ihlola isayensi ukuvikela izintshisekelo zemboni yamakhemikhali; IButterworth isungulwe i-Sense About Science USA ngo-2014 futhi bahlanganisa ama-STATS kulelo qembu.
I-Science Literacy Project yathatha i-ID yentela ye-STATS ku 2015 futhi kufakwe ohlwini njengoMqondisi Ophethe enxeshezelwa ngama- $ 188,800.
Ku-2018, i-ESG MediaMetrics, inkampani ye-Entine's PR, kubike u- $ 176,420 emholweni.
ICentre for Media and Public Affairs nayo ibolekise imali kwaSTATS, okuthi “ngenxa yokungabi bikho kwemali eyanele” “engakabuyiselwa imali.” IGeorge Mason University Foundation, engadaluli uxhaso lwayo, yanikeza izibonelelo ze-CMPA kuleyo minyaka. Amarekhodi entela akhombisa:
I-CMPA ibolekise ama-STATS $ 203,611 ku 2012 / 2013 nemalimboleko engu- $ 163,914 ku- 2013 / 2014
IGeorge Mason University Foundation inikeze i- $ 220,900 in 2012 / 2013 futhi $ 75,670 ku 2013 / 2014 ukuze CMPA.
Imali yezimboni ze-Biotechnology yokuqeqesha ososayensi nezintatheli
Ngo-2014 nango-2015, i-Council for Biotechnology Information, exhaswa yi-BASF, Bayer, DowDuPont kanye neMonsanto Company, yachitha imali engaphezulu kwama- $ 300,000 emicimbini emibili eyayihlelwe yi-Genetic Literacy Project neqembu eliphambili le-Academics Review to “qeqesha ososayensi nezintatheli ukuhlela impikiswano mayelana nama-GMO nobuthi be-glyphosate, ”Ngokwamarekhodi entela nokubika ku I-Progressive. Imicimbi, ibizwa nge- Izinkambu zeBiotech Literacy Project, zabanjelwa e- IYunivesithi yaseFlorida ngo-2014 futhi UC Davis ngo-2015. Ama-ajenda achaza imicimbi ngokuthi "ukuqeqeshwa kwamakhono okuxhumana" kososayensi nezintatheli ukusiza ukuqamba kabusha impikiswano yokuphepha kokudla kanye ne-GMO, futhi bathembisa ukuhlinzeka ososayensi “ngamathuluzi nezinsizakusebenza ezidingekayo ukuze bahlanganyele kahle abezindaba futhi bavele njengongoti kwezomthetho ukulalelwa kohulumeni basekhaya, nokunye ukwenziwa kwemigomo kanye namathuba okufinyelela kubantu ahlobene nalokhu. ”
Isikhundla ekuqaleni ikamu lokuqala ebhuthini kufaka phakathi abamele abavela embonini yezolimo, amaqembu aphambili embonini yokudla namaqembu ezentengiselwano, kanye nezifundiswa ze-pro-GMO kufaka phakathi i-University of Florida Professor UKevin Folta, kanye noProfesa Emeritus waseYunivesithi yase-Illinois UBruce Chassy, bobabili abamukele imali engadalulwanga evela eMonsanto futhi bathuthukisa ama-GMO nemithi yokubulala izinambuzane abathengisa ngayo iMonsanto abathembele kuyo. Washington Post umlobi wephephabhuku lokudla uTamar Haspel, ubani futhi yemukela imali evela kuzintshisekelo zebhizinisi lezolimo, wayeyintatheli kwi-faculty.
Abaxhasi bezimali zesayensi yezulu
Abasekeli abakhulu bezezimali baka-Entine owayengumqashi we-Entine kanye neqembu lakhe lamanje le-Genetic Literacy Project bafaka izisekelo zamaphiko angakwesokudla - ikakhulukazi iScaife Foundation, iSearle Freedom Trust neTempleton Foundation - abahola phambili ekuxhasweni kwezimali zesayensi yezulu, ngokusho kwe Ucwaningo lwe-2013 Drexel University. Bona uphenyo lwe-USRTK: Izimali Zenethiwekhi Yezenhlalo Yesimo Sezulu Esenqabela Inkulumo Yamakhemikhali Anobuthi.
Umfana wezokuvikela umkhakha wamakhemikhali
Iminyaka eminingi, u-Entine ubengumvikeli ovelele wezintshisekelo zemboni yamakhemikhali, elandela incwadi yokudlala yomkhakha: uvikela amakhemikhali njengaphephile; uphikisana nomthethonqubo; futhi ihlasela isayensi, izintatheli zesayensi kanye nabanye baphakamisa ukukhathazeka.
Growing ubufakazi besayensi busikisela ukuthi i-neonicotinoids, isigaba esisetshenziswa kakhulu semithi yokubulala izinambuzane, siyisici esibalulekile ekufeni kwezinyosi. I-European Union ikhawulele ama-neonics ngenxa yokukhathazeka ngomthelela ezinyosini. I-athikili kaFebhuwari 2020 ku-The Intercept kaLee Fang yabika “ngezinkampani zemininingwane yolwazi” izinkampani zokubulala izinambuzane ezilwela ukugcina amakhemikhali emakethe e-US Entine kube yisithunywa esiyinhloko esisekela imboni; uphikise ngokuthi ama-neonics akuyona into ehamba phambili ekufeni kwezinyosi (I-American Enterprise Institute), ukuthi "i-apocalypse yezinyosi yayingakaze ibe ngeyangempela," (Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo) kanye nezinswelaboya okuthiwa zingasiza impilo yezinyosi (I-American Enterprise Institute futhi Forbes). U-Entine uphinde wahlasela ucwaningo lukaprofesa waseHarvard ngezinyosi iColony Collapse Disorder (I-American Enterprise Institute) futhi wasola osopolitiki baseYurophu ngokuzama ukubulala izinyosi ngokuvimbela ama-neonics (Forbes).
Ama-Phthalates ayisigaba samakhemikhali eside axhunyaniswe nokuphazamiseka kwamahomoni, ukulimala kokuzala, izinkinga zokuzala kanye nezixhumanisi zokukhuluphala kwengane, isifuba somoya, izinkinga zezinzwa nezinkinga zenhliziyo. Uhulumeni wase-US waqala ukuvimbela amakhemikhali kumathoyizi ezingane ngo-2013 ngenxa yezinkinga zezempilo. U-Entine uvikele imikhiqizo yezingane equkethe amakhemikhali. "Ambalwa amakhemikhali asemakethe namuhla ahlolisiswe ngokwesayensi njengama-phthalate esters," kubhala u-Entine (Forbes) - kepha akazange asho umzimba obalulekile of ubufakazi besayensi ihlanganiswe ngaphezu kweminyaka engamashumi amabili exhumanisa ukuvezwa kwe-phthalate ku- ukukhula okungavamile kokuzala in izingane zabafana. Imiyalezo yayihlanganisa nokuhlaselwa kwezintatheli; U-Entine usole intatheli ye-NBC ephakamise imibuzo ngokuphepha "kobuntatheli obungenazinhloso." (Forbes). Inkampani yokuxhumana yakwa-Entine, ESG MediaMetrics, yenze i-PR ye Isikhungo seVinyl; i-vinyl plastic ingumthombo obalulekile wokuchayeka kuma-phthalates. U-Entine akazange adalule ukuxhumana kwemboni ezindabeni zakhe zeForbes.
I-Entine ivikela ukubhoboza umfutholuketshezi ("fracking"), ukudonsa amanzi anengcindezi ephezulu anamakhemikhali emhlabathini ukuze aqhekeze i-shale futhi akhiphe igesi yemvelo. Njengakwimikhankaso yakhe eminingi yokuthumela imiyalezo, u-Entine uqhumisa isayensi nososayensi abaphakamisa ukukhathazeka, ebabiza ngokuthi "izishoshovu," ngenkathi enza izitatimende ezishisayo nezingenakuphikiswa mayelana nesayensi "ehlakaniphile" eyenziwe eminyakeni eminingi evikela ukuphepha kwayo. Isibonelo, u-Entine wathi: “Ngokombono wesayensi, asikho isizathu sokuthi umsolwa izindaba ezingaziwa zezempilo noma ezemvelo zizovela ”kusuka ekuqhekekeni (New York Post).
Futhi, ukuhlaselwa bekuyingxenye eyinhloko yemiyalezo. U-Entine usole izintatheli ze-New York Times ngokukhohlisa izingane ngobungozi bezemvelo bokuthwebula (Forbes), wahlasela ososayensi ababili baseCornell University ocwaningweni lwabo bephakamisa ukuthi imisebenzi yokuqhekeza ivule i-methaneForbes), futhi yahlasela iPark Foundation, yathi “icishe yachitha isandla esisodwa sokwakha i-shale-gas eNew York State ecebile nge-methane, futhi yafaka uphawu lwayo emibonweni yomphakathi nasezinqumweni zenqubomgomo ezweni lonke.” (Ubuhle obuyindilinga)
U-Entine ubhala evikela ikhemikhali i-bisphenol A (BPA), yize kukhona ubufakazi obuningi besayensi obuzisa ukukhathazeka mayelana ne-endocrine yayo ephazamisa amandla nezinye izinkinga zempilo ezihambisana nayo. ICanada imemezele ukuthi leli khemikhali linobuthi ngo-2010, kanye ne-EU kuvinjelwe i-BPA emabhodleleni ezingane e 2011.
U-Entine uhlasele abacwaningi baseyunivesithi, ama-NGO nezintatheli bezwakalisa ukukhathazeka nge-BPA (Forbes), kuphakanyiswe ukuthi abesifazane abangakwazi ukukhulelwa akufanele bakusole kuplastikhi (Forbes), futhi waphonsela inselelo ososayensi abaxhumanisa i-BPA nesifo senhliziyo (Forbes).
Ukuvikela Amandla Enuzi
I-Entine ivikela nemboni yamandla enuzi; usho ukuthi izikhungo zamandla enuzi zikhona imvelo imvelo nokuthi “akukho okubi njengaseChernobyl okungenzeka kwenzeke eNtshonalanga.” Usole uSolwazi uNaomi Oreskes waseHarvard isayensi "ukuphika," ngoba, phakathi kokunye, ukukhomba ubungozi bezomnotho nezemvelo bamandla enuzi.
U-Entine ubengumuntu ongakhokhelwa eCentre for Health and Risk Communication eGeorge Mason University (GMU) kusuka ngo-2011-2014. U-Entine ubuye abe ngumuntu ophethe phambili e-UC Davis World Food Center's Institute for Food and Agricultural Literacy, engadaluli. abanikeli bayo, kanye a ovakashele esikanye naye e-American Enterprise Institute, ithangi lokucabanga le-DC elixhaswe ngokwengxenye ngu Inkampani futhi imali emnyama iminikelo.
Bona futhi, Ikhasi le-Greenpeace Polluter Watch kuJon Entine naku “indaba efihliwe yePhrojekthi ye-Genetic Literacy Project. "
Amaqembu ahlobene nabantu
Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo
UPamela Ronald no-UC Davis
Amaphrojekthi we-Biotech Literacy
Ukudla Okucatshangwayo, IHholo Lamahloni, Uphenyo lwethu Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, Izifundo zeRegional.org, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, I-American Enterprise Institute, U-Amy Harmon, Ama-Boot Camp weBiotechnology Literacy Project, UBruce Chassy, Isikhungo Sobuqotho Bokudla, Isikhungo Sokuxhumana Ngezempilo kanye Nengozi ku-GMU, Isikhungo Sezindaba Nezindaba Zomphakathi, UCharles Koch, I-Chemophobia, I-CMA, Isikhwama Sezimali Sabanikeli, Abaxhasi Trust, U-Eric Sachs, ESG MediaMetrics, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, UGeorge Mason University, IGeorge Mason University Foundation, UJohn Templeton Foundation, UJon Entine, UKeith Kloor, UKevin Folta, Ama-Koch Industries, Monsanto, URobert Lichter, ISchaife Foundation, Iphrojekthi Yezesayensi Yokufunda, ISearle Freedom Trust, Isevisi Yokuhlola Izibalo, Syngenta, UTamar Haspel, Isikhungo se-UC Davis World Food Center Sokufunda Nokufunda Kwezolimo, University of Florida, University of Illinois, Isikhungo seVinyl, I-Winkler Family Foundation
Indlela Abadukisa Ngayo UTamar Haspel Abafundi BeWashington Post
Posted on August 23, 2018 by UStacy Malkan
UTamar Haspel yintatheli ezimele ebilokhu ibhala amakholomu okudla nyangazonke eWashington Post kusukela ngo-Okthoba 2013. Amakholomu kaHaspel avame ukukhuthaza nokuvikela imikhiqizo yezimboni zezolimo, kuyilapho ethola nezinkokhelo zokukhuluma emicimbini ehambisana nemboni, futhi kwesinye isikhathi evela emaqenjini ezimboni - umkhuba owaziwa ngokuthi yi "buckraking" ophakamisa imibuzo mayelana nokuqonda.
Ukubuyekezwa kwamakholomu kaHaspel eWashington Post kuphakamisa okunye ukukhathazeka: ezimweni eziningi, uHaspel wehlulekile ukudalula noma achaze ngokuphelele ukuxhumana kwezimboni ngemithombo yakhe, kuncike ezifundweni ezigxilwe embonini, amaqiniso akhethwe ngamakhemikhali okuxhasa izikhundla zomkhakha noma acaphune inkulumo-ze yezimboni ngokungafanele . Bona ukubuyekezwa komthombo nezinye izibonelo ezichazwe ngezansi. UHaspel ubengakaphenduli emibuzweni yale ndatshana.
Ukubheja ekushayweni kokudla: ukushayisana kwezintshisekelo?
Engxoxweni yango-2015 eyayiqhutshwa yiWashington Post, ephendula umbuzo wokuthi ngabe uyayithola yini imali emithonjeni yezimboni, uHaspel wabhala lokho, "Ngiyakhuluma futhi ngilinganisa amaphaneli nezimpikiswano kaningi, futhi kungumsebenzi engikhokhelwa wona." Udalula ukuzibandakanya kwakhe kokukhuluma kuye iwebhusayithi yomuntu siqu, kepha ayivezi ukuthi yiziphi izinkampani noma amaqembu okuhweba amxhasa ngemali noma ngamanani abawanikezayo.
Lapho ebuzwa ukuthi uthathe malini embonini yezolimo kanye namaqembu ayo angaphambili, UHaspel ubhale kuTwitter, “Njengoba noma yiliphi iqembu elikholelwa ukuthi i-biotech linokuthile elikunikezayo 'liqembu eliphambili,' inala!”
Ngokusho the Amazinga we-Washington Post kanye Nezimiso Zokuziphatha, izintatheli azikwazi ukwamukela izipho, ukuhamba mahhala, ukuphathwa ngendlela ekhethekile noma ukwamukelwa mahhala emithonjeni yezindaba, futhi “kufanele zenze wonke umzamo wokuhlala kubalaleli, zingashiyi inkundla, zibike izindaba, hhayi ukwenza izindaba.” Le mithetho ayisebenzi kuma-freelancers kodwa, futhi iphepha likushiyela kubahleli ukuthi bathathe isinqumo.
UHaspel uchaza inqubo yakhe yokwamukela izingxoxo zokukhokha ezikhokhelwayo kuye iwebhusayithi yomuntu siqu: ukuthi imicimbi iyizimpikiswano ezakhayo mayelana nezindaba zokudla ezibandakanya amaphimbo amaningi kunezinkampani ezenza inzuzo. Akuyona yonke imicimbi esohlwini lwakhe ebonakala ihambisana naleyo mibandela (bona “imicimbi yokuqeqeshwa kwemiyalezo ye-biotech” imicimbi yokuqeqeshwa komyalezo exhaswa ngezimboni echazwe ngezansi). Umhleli kaHaspel uJoe Yonan usho kanje unethezekile ngendlela uHaspel asebenza ngayo ekukhulumisaneni okukhokhelwayo futhi uthola ukuthi "kuyisilinganiso esifanelekile."
Ukuphawula okwengeziwe okuvela kuHaspel nakuYonan kubikwa lapha, "I-Buckraking kwi-Food Beat: Kunini lapho kungqubuzana kwezintshisekelo?" by Stacy Malkan (Ubulungiswa kanye nokunemba ekubikeni, 2015). Bheka futhi, "Umbiko omfushane ngezintatheli ezintathu okukhulunywe ngazo kwizicelo zethu ze-FOIA," nguGary Ruskin (I-US Ilungelo Lokwazi, 2015). Ngemibono evela kuzintatheli nabahleli bebhakede, bheka ukubika kukaKen Silverstein (IHarper's, ngo-2008).
Ukuthatha isigqi se-GMO
UHaspel waqala ukubhala ngokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo ku- Mashi 2013 ku-Huffington Post ("Iya eFrankenfish! Kungani Sidinga i-GM Salmon"). Imibhalo yakhe ngezinye izihloko ezihlobene nokudla yaqala ukuvela eWashington Post naseHuffPo ngo-2011 nakwezinye izindawo kusukela maphakathi nawo-1990. Okokugcina kukaHaspel uchungechunge lwezihloko zeHuffington Post kwaqhubeka ngesihloko semikhiqizo yezimboni yezolimo, ngamabhulogi wokukhishwa kwezifundo mayelana nezingozi ezingaba khona ze- glyphosate futhi Ukudla kwezilwane kwe-GMO, A impikiswano ngokumelene Imikhankaso yokulebula i-GMO kanye ucezu olukhukhumezayo mayelana newebhusayithi yezentengiso yezimboni zezolimo, Izimpendulo ze-GMO.
GMOAnswers.org bekuyingxenye yomkhankaso wobudlelwano bomphakathi obudle izigidi zamarandi i imboni yezolimo yamenyezelwa entwasahlobo ka-2013 ukulwa nokukhathazeka kwabathengi mayelana nokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo ngemuva kwemikhankaso yokuqamba ama-GMO amalebuli.
I-HuffPo Julayi 2013: Isibonelo sendlela iHaspel eyithuthukise ngayo imithombo yezimboni ngokungaqondile. Ezinye izibonelo ezingezansi.
Ikholomu Elitholakele leWaPo: kumbiwe imibono yezimboni
UHaspel wethule ikholomu yakhe yokudla “Evunjiwe” nyangazonke eWashington Post ku October 2013 ("Ukudla okushintshwe izakhi zofuzo: Kuyini futhi akulona iqiniso") ngesithembiso sokuthi “umbe ujule ukuzama ukuthola ukuthi yini eyiqiniso nokuthi yini engekho empikiswaneni ephathelene nokudla kwethu.” Weluleke abafundi ukuthi babone ukuthi “ungamethemba ngubani” empikiswaneni ye-GMO futhi wakhomba amaqembu amaningi angazange aluphumelele uvivinyo lwakhe lokungakhethi (i-Union of Concerned Scientists phakathi kwabo).
I-Haspel November 2013 ikholomu (“okuvunyelwene ngakho yi-GMO: Lapho abasekeli nabaphikisi bavumelana khona”) kunikeze imibono ebanzi ebanzi kusuka kuzintshisekelo zomphakathi kanye nasemithonjeni yezimboni; Kodwa-ke, kumakholomu alandelayo, uHaspel kuyaqabukela ecaphuna amaqembu anentshisekelo yomphakathi futhi abeke isikhala esincane kakhulu kochwepheshe bezempilo yomphakathi kanye nemithombo yedatha kunalokho akwenzayo kwimithombo exhunywe embonini noma kochwepheshe ekuhlaziyweni kobungozi noma "ekuboneni ubungozi" abavame ukubukela phansi impilo yomphakathi nokuphepha ukukhathazeka, kanye nokubukwa kwemboni. Ezimweni eziningana, iHaspel yehlulekile ukudalula noma ichaze ngokuphelele ukuxhumana kwezezimboni nemithombo.
Ikholomu 'yokunyakaza kokudla' okwenziwe umkhakha
Isibonelo esikhombisa ezinye zalezi zinkinga ngezeHaspel January 2016 ikholamu ("Iqiniso elimangazayo ngokuhamba kokudla"), lapho athi khona abantu abakhathalele ubunjiniyela bezakhi zofuzo noma ezinye izici zokukhiqizwa kokudla - "ukunyakaza kokudla" - bayingxenye engezansi yabantu. Akahlanganisanga nezingxoxo nabathengi, ezempilo, ezemvelo noma amaqembu ezobulungiswa azithatha njengengxenye yokunyakaza kokudla.
IHaspel ithole ikholamu ngamaqembu amabili wespin axhaswe ngemali embonini, i- Umkhandlu Wokwaziswa Kwezokudla Womhlaba Wonke futhi UKetchum, inkampani yezobudlelwano bomphakathi eqhuba Izimpendulo ze-GMO. Ngenkathi echaza uKetchum njengenkampani ye-PR "esebenza kakhulu nomkhakha wezokudla," uHaspel akazange adalule ukuthi uKetchum waqashwa imboni yezolimo ukuze ashintshe umbono wabathengi ngokudla kwe-GMO (futhi akazange akhulume ngomlando wehlazo kaKetchum i-flacking yeRussia futhi eqhuba izinhloli ngokumelene namaqembu ezemvelo).
Umthombo wesithathu wekholomu yakhe kwakuyinhlolovo yocingo eneminyaka emibili eyenziwe UWilliam Hallman, umhlaziyi wombono womphakathi ovela kuRutgers obike ukuthi abantu abaningi abanendaba nokubekwa ilebula kwe-GMO. (Ngonyaka owedlule, uHallman noHaspel baxoxisana ngemibono yabathengi mayelana nama-GMO ngokuxhaswa nguhulumeni iphaneli abelane ngayo no-Eric Sachs waseMonsanto.)
Ukusebenzisana namaqembu we-spin spin
Ukusondelana kukaTamar Haspel kanye nokusebenzisana kwakhe nabadlali ababalulekile emizamweni yezobudlelwano nomphakathi embonini yezolimo kuphakamisa okunye ukukhathazeka mayelana nenhloso yakhe.
A isilinganiso sokuphromotha esivela eHaspel ivela ekhasini eliyisiqalo le-STATS / Sense About Science, ichaza ama-STAT "njengabaluleke" ekubikeni kwakhe. Ezinye izintatheli zichaze ama-STATS njenge- umkhankaso wokuvikela umkhiqizo “umkhankaso wokwaziswa okungaziwa”Lokho kusebenzisa amaqhinga kagwayi okukhiqiza ukungabaza ngengozi yamakhemikhali futhi idlala indima ebalulekileezombusazwe ze-hardball zokulawulwa kwamakhemikhali. ” I-2016 Indaba ku-The Intercept ichaze izibopho zikagwayi ze-STATS ne-Sense About Science (ezihlanganiswe ngonyaka wezi-2014 ngaphansi kokuqondiswa kaTrevor Butterworth) nendima abayidlalayo ekuphusheni imibono yezimboni ngesayensi.
Ubudlelwano bomphakathi ngo-2015 idokhumenti yamasu waqamba igama elithi Sense About Science phakathi kwe- “abalingani bemboni ”UMonsanto uhlele ukuzibandakanya emkhankasweni wayo "wokulungisa ukukhala" ngokumelene ne-ejensi yocwaningo lomdlavuza yeWorld Health Organisation ukudicilela phansi umbiko mayelana ne-carcinogenicity ye-glyphosate.
Umkhakha wezolimo ujikeleza imicimbi
NgoJuni 2014, iHaspel yayiyi- Ilungu le "faculty" (eceleni kwabamele imboni abambalwa) emcimbini wokuqeqeshwa kwemiyalezo obizwa nge- Ikamu Le-Boot Biotech Literacy Project lokho kwaxhaswa yimboni yezolimo futhi kwahlelwa yi Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project futhi Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, amaqembu amabili aphambili embonini iMonsanto nawo ayikhombe "njengabalingani bemboni" kuyo Uhlelo lwe-2015 PR.
IGenetic Literacy Project ingeyokuqala uhlelo lwe-STATS, kanye ne-Academics Review kwaba usethe ngosizo lweMonsanto kuya hlazisa abagxeki bezimboni ngenkathi ugcina ukusebenzisana izigxivizo zeminwe zifihliwe, ngokuya ngama-imeyili atholwe ngezicelo zamarekhodi womphakathi.
Ikhempu ebihanjelwa yiHaspel ibihlose “ukulungisa kabusha impikiswano mayelana nokudla kanye nempikiswano ye-GMO,” ngokwe-ajenda. UPaul Thacker ubike ngalo mcimbi ku-Okuqhubekayo, "Imboni iphinde yaxhasa ngasese uchungechunge lwezingqungquthela ukuqeqesha ososayensi nezintatheli ukubumba impikiswano ngama-GMO nobuthi be-glyphosate… Kuma-imeyili, abagqugquzeli babhekise kulezi zingqungquthela njengezikhungo zokufundisa ukufunda nge-biotech, kanti izintatheli zichazwa 'njengabalingani.' ”
Izifundiswa ezijwayele amaqhinga we-spin we-corporate zibuyekeze imibhalo yekamu ebhuthini ngesicelo sikaThacker. “Lezi yizinto ezicindezelayo,” kusho uNaomi Oreskes, uprofesa womlando wesayensi eHarvard University. "Kusobala ukuthi kuhloswe ngakho ukukholisa abantu ukuthi izitshalo ze-GMO zinenzuzo, ziyadingeka, futhi aziyona ingozi eyenele ukufakazela ukufakwa kwamagama." UMarion Nestle, uprofesa wezokudla, izifundo zokudla, kanye nempilo yomphakathi eNyuvesi yaseNew York, uthe, "Uma izintatheli ziya ezingqungqutheleni ezikhokhelwa ukuya kuzo, kumele zisole ngokusobala."
UCami Ryan, owayesebenza ekamu ebhuthini owaqhubeka nokusebenzela iMonsanto, kuphawulwe ku- ukuhlolwa komhlangano ababambiqhaza babefuna, "Izikhathi eziningi ze-Haspel-ish, ama-Ropeik-ish." UDavid Ropeik ungumeluleki wokubona ngobungozi kabani amaklayenti afaka iBayer nezinye izinkampani zamakhemikhali, nobani Haspel esetshenziswe njengomthombo kukholamu abhale ngayo nge-glyphosate.
Usuku lwe-2015 lwe-biotech literacy noKevin Folta
NgoMeyi 2015, uHaspel wethule inkulumo ethi “usuku lwe-biotechnology literacy kanye nezokuxhumana”E-University of Florida ehlelwe nguKevin Folta, uprofesa oxhumene nomkhakha wezolimo ezimayelana Nomphakathi futhi imizamo yokunxenxa. UFolta wayefake iHaspel ku Isiphakamiso wasithumela eMonsanto efuna ukuxhaswa ngezimali emicimbini ayichaze “njengesixazululo senkinga yokuxhumana nge-biotech” esivela “ekulawuleni umbono womphakathi” kanye “nokuqinisa kwabo imizamo yokufaka ilebula yokudla ngokungadingekile.” Ikhasi 4 le- Isiphakamiso uchaze umcimbi ozofaka oprofesa be-UF “nabanye abaningi abalethwe bevela ngaphandle kubandakanya nabamele imboni, ongoti bezintatheli kwezokuxhumana kwezesayensi (isib. . ”
Monsanto isiphakamiso sikaFolta esixhaswe ngemali, bakubiza ngokuthi “indlela enhle evela eceleni yokuthuthukisa uhlobo lokukhuthaza esifuna ukuluthuthukisa.” (Imali ibiyi ezanikelwa endaweni yokudla ngo-Agasti 2015 ngemuva kokuthi uxhaso lube sesidlangalaleni.)
Ngo-Ephreli 2015, uFolta wabhalela uHaspel ngemininingwane emayelana nomcimbi wokuqeqeshwa kwemiyalezo, “Sizobhekana nezindleko kanye ne-honorary, noma yini edingekayo. Izethameli kuzoba ososayensi, odokotela kanye nabanye ochwepheshe okudingeka bafunde ukuthi bangakhuluma kanjani nomphakathi. ”
UHaspel uphendule wathi, "Ngingene impela," futhi udlulise i-anecdote evela kwelinye iphaneli "lokuxhumana ngesayensi" elisanda kushintsha umbono womuntu mayelana neMonsanto. "Kungenzeka ukuhamba phambili, kodwa ngiyaqiniseka ukuthi kungenxa yokuxhumana komuntu nomuntu," kusho uHaspel ebhalela uFolta.
The i-ajenda efakwe kungobo yomlando ngosuku lokuxhumana eFlorida lubhale izikhulumi njengoHaspel, Folta, abanye osolwazi abathathu be-UF, isisebenzi saseMonsanto uVance Crowe kanye nabamele Kwenziwe kabusha futhi Isikhungo Sobuqotho Bokudla (amanye amaqembu amabili iMonsanto ebizwa ngokuthi abalingani bomkhakha isu layo le-PR lokuvikela i-glyphosate). Kwenye imeyili kuFolta, UHaspel wakuthakasela ukuhlangana noCrowe, “Ngikubheke ngabomvu lokhu. (Bengifuna ukuhlangana noVance Crowe - ngijabule kakhulu ukuthi uzobe ekhona.) ”
NgoSepthemba 2015, iThe New York Times yaveza uFolta ku- indaba esekuqaleni ngu-Eric Lipton mayelana nokuthi amaqembu embonini athembele kanjani kwizifundiswa ukulwa nempi yokulebula i-GMO. U-Lipton ubike ngesicelo sikaFolta sokuqoqa imali esiya eMonsanto, nokuthi uFolta ubelokhu esho esidlangalaleni ukuthi akanabo ubudlelwano neMonsanto.
UHaspel ubhalele uFolta ezinyangeni ezimbalwa kamuva, "Ngiyaxolisa kakhulu ngalokho osudlule kukho, futhi kuyakhathaza lapho ukuhlaselwa okunenhliziyo embi, kunabahlanganyeli kufihla izingqinamba zangempela - kwezesayensi kanye nasekubonakaliseni izinto obala, zombili lezi zinto ezibaluleke kakhulu." UHaspel ubalule ukuthi ubesebenza neNational Press Foundation ukuthuthukisa ukungqubuzana okungcono kwamazinga wenzalo yezintatheli ezizimele.
IHaspel kwakuyi 2015 umuntu weNational Press Foundation (iqembu elixhaswe ngemali yizinkampani, kufaka phakathi IBayer neDuPont). Kundatshana abhalele yona i-NPF mayelana izimiso zokuziphatha zabasebenza ngokuzimela, UHaspel uxoxe ngokubaluleka kokudalulwa futhi wachaza nenqubo yakhe yokukhuluma emicimbini kuphela uma ababambiqhaza okungebona bezimboni nemibono ehlukahlukene bebandakanyekile - imigomo engafinyelelwanga yimicimbi ye-biotech literacy. Ikhasi lokudalula ku- iwebhusayithi yakhe ayivezi ngokunembile i- abahlanganisi nabaxhasi wekamu lebhuthi lokufunda nokubhala le-biotech ka-2014. UHaspel akayiphendulanga imibuzo ephathelene nemicimbi yokufunda nge-biotech.
Ukubuyekezwa komthombo: ukubika okulahlekisayo ngama-pesticides
Ukubuyekezwa komthombo kwamakholomu amathathu kaTamar Haspel eWashington Post ngesihloko semithi yokubulala izinambuzane kutholakale okuningi okuphathelene nezibonelo zemithombo engaxhunywanga exhunywe embonini, ukushiywa kwedatha nokubikwa okungaphandle komongo okusebenzise ukuqinisa imiyalezo embonini yezibulala-zinambuzane ukuthi imithi yokubulala izinambuzane ayiyona inkinga futhi organic akuyona inzuzo enkulu. Ukubuyekezwa komthombo kuhlanganisa lamakholomu amathathu:
“Ingabe okuphilayo kungcono empilweni yakho? Ukubheka ubisi, inyama, amaqanda, umkhiqizo kanye nenhlanzi ”(April 7, 2014)
“Yikhemikhali iMonsanto elincike kuyo. Kuyingozi kangakanani? ” (October 2015)
"Iqiniso ngomkhiqizo ophilayo kanye ne-pesticides" (Kwangathi 21, 2018)
Kuncike emithonjeni exhunywe embonini; yehlulekile ukudalula ubudlelwane bemboni yabo
Kuwo womathathu amakholomu aboniswe kulokhu kubuyekezwa komthombo, iHaspel yehlulekile ukudalula ukuxhumana kwemikhakha yezibulala-zinambuzane emithonjeni esemqoka eyehlisa ubungozi bemithi yokubulala izinambuzane. Akukho nokukodwa kokuxhuma embonini okulandelayo okukhulunywe ngakho kumakholomu akhe kusukela ngo-Agasti 2018 ngenkathi lokhu kubuyekezwa kushicilelwa.
Embikweni wakhe we-2018 "weqiniso mayelana nomkhiqizo wemvelo kanye ne-pesticides," uHaspel unikeze abafundi "umbono wobungozi obukhulu" kusuka ekuvezweni kwezibulala-zinambuzane okwandayo ngokucaphuna isifundo lokho kulinganisa ubungozi bokudla izibulala-zinambuzane kusuka ekudleni kuya ewayinini yokuphuza. UHaspel akazange adalule ukuthi ababhali abane kwabahlanu balolo cwaningo babeqashwe yiBayer Crop Sciences, engomunye wabakhiqizi abakhulu bezibulala-zinambuzane emhlabeni. Akazange futhi adalule ukuthi ucwaningo ekuqaleni lwalunephutha eliqhakazile elalilungiswa kamuva (noma ngabe wayexhumanisa nocwaningo lokuqala nolungisiwe). Ucwaningo ekuqaleni lwabika ingozi elingana nokuphuza ingilazi eyodwa yewayini njalo iminyaka eyisikhombisa; kamuva yalungiswa yaba ingilazi eyodwa yewayini njalo izinyanga ezintathu; Lelo phutha namanye amaningi akhonjwe kuwo incwadi eya kulo magazini ososayensi abaningana abachaze ucwaningo lwewayini "njengolulula ngokweqile noludukisa kakhulu."
Ukuchitha ukukhathazeka ngemiphumela yokuhlangana kokuchayeka kwizibulala-zinambuzane eziningi, uHaspel ucaphune enye cwaningo kusuka kumbhali okuyiwona kuphela onxuse i-Bayer ocwaningweni olunamaphutha lokuqhathanisa iwayini, futhi “a Umbiko we-2008”Lokho“ kwenza ukuhlolwa okufanayo. ” Ababhali balowo mbiko wango-2008 bahlanganisa u-Alan Boobis no-Angelo Moretto, izifundiswa ezimbili ezabanjwa ku ukungqubuzana kwehlazo lenzalo ngo-2016 ngoba babe ngusihlalo wephaneli le-UN elakhipha i-glyphosate engcupheni yomdlavuza ngasikhathi sinye njengoba babephethe izikhundla zobuholi e I-International Life Sciences Institute, iqembu elingenzi nzuzo elithole okukhulu iminikelo evela embonini yezibulala-zinambuzane.
Kwikholamu yakhe yango-2015 emayelana nobungozi be-glyphosate, “ikhemikhali iMonsanto incike kuyo,” uHaspel ucaphune imithombo emibili exhumene nemboni yezibulala-zinambuzane angayidalulanga: uKeith Solomon, usosayensi wezobuthi owabhala amaphepha nge-glyphosate ixhaswe nguMonsanto (futhi ngubani uMonsanto ukukhuthaza njengomthombo); noDavid Ropeik, ongumxhumanisi wokubona ngobungozi ohambisana neHarvard naye onenkampani yePR amaklayenti afaka iDow, iDuPont neBayer. UHaspel noRopeik bakhulume ndawonye emkhakheni wezolimo imiyalezo exhaswe umkhakha ukuqeqeshwa ikamu ebhuthini e-University of Florida e 2014.
Kwikholamu yakhe yango-2014 mayelana nokuthi izinsalela zezibulala-zinambuzane ekudleni zibeka engcupheni yini ezempilo, uHaspel wethule ukungabaza ngezingozi zezempilo ze-organophosphates, isigaba semithi yokubulala izinambuzane exhumene ukulimala kwemizwa ezinganeni, Nge ukubuyekeza ethola ukuthi "izifundo ze-epidemiological azizange zithinte ngokuqinile noma imuphi umuthi wokubulala izinambuzane njengoba uhlobene kakhulu nemiphumela emibi yokukhula kwezinzwa ezinganeni nasezinganeni." Umbhali oholayo wayengu- UCarol Burns, usosayensi eDow Chemical Company, ongomunye wabakhiqizi abakhulu be-organophosphates ezweni.
Leyo kholamu ibuye yasebenzisa imboni eya kusosayensi wezobuthi uCarl Winter njengomthombo wokuqinisekisa ukuphepha kwezinsalela zezibulala-zinambuzane ekudleni okususelwa ekuhlolweni kwe-EPA. IMonsanto yayikhona ukugqugquzela umsebenzi kaBusika ngaleso sikhathi ezindaweni zokukhuluma, kanti uBusika naye wakhonza kwi ibhodi lokweluleka ngesayensi weqembu elixhaswe ngemali yiMonsanto Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, okuyinto ngiziqhayisa kokuthunyelwe kwebhulogi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule mayelana nokushicilelwa kwe-anti-organic okwakucaphuna umfana wabo, "umeluleki we-ACSH uDkt. Carl Winter."
Idukisiwe nokubikwa okungaphandle kokuqukethwe
Kwikholamu yakhe yango-2014, uHaspel wasebenzisa iphepha lika-2012 yiAmerican Academy of Pediatrics ngaphandle komongo ukuqinisa impikiswano yakhe yokuthi ukudla i-organic kungahle kunganikeli izinzuzo zezempilo, kepha akabazisanga abafundi ngobubanzi obugcwele besifundo noma iziphetho. I- Iphepha le-AAP walandisa ngobufakazi obuningi besayensi obukhombisa ukulinyazwa kwezingane kusuka kokuchayeka okunzima nokuhlala isikhathi eside kuya kuma-pesticides ahlukahlukene, futhi waphetha ngokuthi, "Ukuchayeka kwezingane emithini yokubulala izinambuzane kufanele kukhawulelwe ngangokunokwenzeka." Lo mbiko ucaphune ubufakazi bokuthi “kwehle ngokushesha okukhulu ekukhishweni komchamo kwama-metabolites ezibulala-zinambuzane” ezinganeni ezidla ukudla okungokwemvelo. I-AAP nayo ikhishiwe izincomo zenqubomgomo ukunciphisa ukutholakala kwezingane emithini yokubulala izinambuzane.
UHaspel washiya wonke lowo mongo futhi wabika kuphela ukuthi umbiko we-AAP, “waphawula ukuhlangana phakathi kokuvezwa kwe-organophosphate nezinkinga zezinzwa ezitholakale kwezinye izifundo kodwa waphetha ngokuthi kusengakacaci ukuthi ukwehliswa kokuchayeka ngokudla izinto eziphilayo kungaba 'emtholampilo efanele. '”
Kwikholamu yakhe yango-2018, uHaspel wadukisa wabika ukuthi i-chlorpyrifos ye-pesticide “kube yimpi phakathi kwamaqembu ezemvelo, afuna ukuthi ivinjelwe, ne-EPA, engafuni” - kepha akabazisanga abafundi ngephuzu elisemqoka: ukuthi i-EPA wayencome ukuvinjelwa i-chlorpyrifos ngenxa yobufakazi obandayo bokuthi ukutholakala kokubeletha kungahle kwenzeke ube nemiphumela ehlala njalo ebuchosheni bezingane. I-ejensi ihlehlise inkambo kuphela ngemuva kwe- UTrump EPA waphazamisa. UHaspel uthole umusho wakhe odukisayo othi “amaqembu ezemvelo vs EPA” ngokuxhumanisa neNew York Times ikhasi lemibhalo lokho kunikeze umongo omncane ngesinqumo se-EPA, kunokuxhumanisa nendaba ye-NYT echaze i- umongo wezepolitiki wethonya lenkampani.
Kuncike emithonjeni evumelana
Kwikholamu yakhe ka-2018, uHaspel usungule impikiswano yakhe yokuthi ukuvezwa kwezibulala-zinambuzane ekudleni akukhathazi kakhulu isu lokuzibika elisolisayo alisebenzise kwezinye izikhathi: ecacisa isivumelwano phakathi kwemithombo eminingi ayaziyo. Kulokhu, uHaspel ubike ukuthi amazinga ezibulala-zinambuzane ekudleni “aphansi kakhulu” futhi “akufanele ukhathazeke ngawo,” ngokusho kwe- “i-USDA ne-Environmental Protection Agency (kanye nabaningi bezazi ezinobuthi engikhulume nabo iminyaka). ” Yize ebike ukuthi, "Akuwona wonke umuntu onokholo kulezo zivivinyo," uHaspel akazange akhulume ngemithombo engavumelani futhi wakushaya indiva ngokuphelele lokho Umbiko we-American Academy of Pediatrics lokho kuncoma ukwehliswa kokuchayeka kwezingane emithini yokubulala izinambuzane, akubalule ngokungahambisani nekholamu yakhe yango-2014. Kwikholamu yakhe yango-2015 ekhuluma nge-glyphosate waphinde wacaphuna imithombo enomqondo ofanayo, ebika ukuthi usosayensi “ngamunye” akhulume naye “uqaphele ukuthi kuze kuphakame imibuzo yakamuva, i-glyphosate ibiphawuliwe ngokuphepha kwayo.”
Kuphuthelwe idatha efanele
Idatha efanelekile uHaspel uphuthelwe kuyo ekubikeni kwakhe mayelana nobungozi noma ama-pesticides kanye nezinzuzo zezitatimende ezifakiwe eziphilayo ngamaqembu ezempilo avelele kanye nesayensi yakamuva:
Isifundo sikaJanuwari 2018 ngabaphenyi baseHarvard abashicilelwe ku- JAMA Internal Medicine bebika ukuthi abesifazane abahlale bedla izithelo nemifino elashwa ngezibulala-zinambuzane baba namazinga aphansi empumelelo abakhulelwa i-IVF, kuyilapho abesifazane abadla ukudla okuphilayo benemiphumela engcono;
Januwari 2018 ukuphawula kwiJAMA ngudokotela wezingane uPhillip Landrigan enxusa odokotela ukuba bakhuthaze iziguli zabo ukuba zidle okuphilayo;
Umbiko kaFebhuwari 2017 ilungiselelwe iPhalamende laseYurophu elichaza izinzuzo zezempilo zokudla ukudla okuphilayo nokwenza ezolimo eziphilayo;
Ukuhlolwa Kokukhethwa Kokukhethwa Kwenketho Yezobuchwepheshe ePhalamende lase-2016 Kunconywe ukwehliswa kokudla kwezibulala-zinambuzane, ikakhulukazi kwabesifazane nezingane;
Umbiko wePhaneli kaMdlavuza ka-2012 incoma ukwehlisa ukuvezwa kwezingane ekuvezweni okubangelwa umdlavuza kanye nokukhuthaza umdlavuza kwezemvelo;
Iphepha le-2012 futhi izincomo zenqubomgomo evela eAmerican Academy of Pediatrics encoma ukwehlisa ukutholakala kwezingane emithini yokubulala izinambuzane ngangokunokwenzeka;
Isitatimende se-2009 yi-American Public Health Association, "Ukuphikisana nokusetshenziswa kwabagqugquzeli bokukhula kwamahomoni ekukhiqizeni izinkomo zenyama nezobisi";
Ukubuyekeza kwe-2002 yi-European Union's Scientific Committee on Veterinary Measures Review ibika ukuthi ama-hormone akhulisa ukukhula ekukhiqizeni inyama yenkomo abeka impilo engozini kubathengi.
Imibono eminingi yokubika kukaHaspel
“Inhlangano yokudla incane? Akuveli lapho sihlala khona, ”kusho uChellie Pingree no-Anna Lappé, Washington Post (2.4.2016)
"Umbhali wephephandaba waseWashington Post uyoshaya iMonsanto - futhi," nguStacy Malkan, Ukulunga nokunemba ekubikeni (2.4.2016)
Ukubheja kwi-Food Beat: Kunini lapho kungqubuzana kwezintshisekelo khona? ” nguStacy Malkan, Ukulunga nokunemba ekubikeni (10.28.2015)
"Impendulo yokuthi 'Ingabe Okuphilayo Kungcono Yini Empilweni Yakho?'” Isikhungo se-Organic (4.8.2014)
"Ukuhlaselwa kwe-Organic: Ukuziba isayensi ukwenza icala lokulima ngamakhemikhali," nguKari Hamerschlag noStacy Malkan, Ukulunga nokunemba ekubikeni (7.2014)
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, ACSH, U-Alan Boobis, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, U-Amy Harmon, Angelo Moretto, Bayer, I-Bayer Crop Sciences, Kwenziwe kabusha, ikamu lokufundela ukufunda nge-biotech, Iphrojekthi Ye-Biotech Literacy, UCami Ryan, UCarl Winter, UCarol Burns, UCathleen Enright, Isikhungo Sobuqotho Bokudla, CFI, chlorpyrifos, UDan Kahan, UDavid Ropeik, IDow Chemical, Dupont, U-Eric Sachs, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, glyphosate, Izimpendulo ze-GMO, IFIC, Umkhandlu Wokwaziswa Kwezokudla Womhlaba Wonke, UJoe Yonan, UKeith Solomon, UKetchum, UKevin Folta, Monsanto, INational Press Foundation, Rutgers, Umuzwa Ngezesayensi, IZIBALO, Syngenta, UTamar Haspel, UTrevor Butterworth, Trump EPA, Inyuvesi yaseCalifornia eDavis, University of Florida, Vance Crowe, Washington Post, UWilliam Hallman
Izindlela ezilahlekisayo nezikhohlisayo zikaDkt Kevin Folta
Posted on August 1, 2018 by UStacy Malkan
UKevin Folta, Ph.D., uprofesa kanye nosihlalo woMnyango Wezesayensi Yezolimo eNyuvesi yaseFlorida, unikeze imininingwane enganembile futhi wenza imisebenzi edukisayo emizamweni yakhe yokukhuthaza ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo kanye nemithi yokubulala izinambuzane. Icala lakhe lakamuva elibhekene neThe New York Times yilona lakamuva kulayini omude wezibonelo zokuxhumana kukaDkt Folta okudukisayo nokukhohlisayo.
Wamangalela i-NYT ngokubika izibopho zakhe eMonsanto; icala lichithiwe
NgoSepthemba 1, 2017, uDkt. Folta wafaka icala elibhekene neThe New York Times no-Eric Lipton, intatheli eyanqoba kathathu ngomklomelo wePulitzer Prize, bethi bayamhlambalaza Indatshana yekhasi langaphambili lika-2015 lokho kuchaze ukuthi iMonsanto ibhalise kanjani izifundiswa eziphikisana nokubhalwa kokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo.
Icala likaDkt Folta lachithwa ngoFebhuwari 27, 2019. Ijaji likahulumeni lavumela ukuthi abamangalelwa bafake isicelo isahlulelo sokugcina sokufingqa.
Isikhalazo esichitshiyelwe (10 / 5 / 2017)
NYT ukunyakaza (10 / 19 / 2017)
Ijaji likahulumeni waphika iziphakamiso zikaDkt Folta zokuphoqelela ukutholakala, ukubiza ezinye zalezi zicelo ngokuthi "ziwubuphukuphuku impela" futhi "ziyahlekisa" (5/11/2018)
NYT futhi Eric Lipton isiphakamiso sesifinyezo sokugcina (7 / 25 / 18)
Kuchitshiyelwe uDkt Folta ukuphikisana nesiphakamiso sokwahlulela okufingqiwe (8 / 16 / 18)
I-oda lokunikezwa kwesicelo sabamangalelwa sokuthi isahlulelo sokugcina sokufingqa (2 / 27 / 19)
UDkt Folta wathuthela ku lichithe icala futhi lachithwa (4 / 9 / 2019)
Icala likaDkt. Folta lathi abamangalelwa “babemchaza kabi njengomuntu okhokhelwa ngokufihliwe njengenye yezinkampani ezinkulu nezinempikiswano enkulu eMelika, iMonsanto,” nokuthi bakwenza lokho ukuze “baqhubekisele phambili uhlelo lwabo 'lwe-GMO'." Ngokusho kwecala likaDkt. Folta, uLipton “ucishe wazithulisa yedwa umphakathi wesayensi ekufundiseni ososayensi indlela yokukhulumisana.”
Icala lathi uDkt Folta “akakaze asithole” “isibonelelo esingavinjelwe” esivela eMonsanto nokuthi “akakaze athole noma yiluphi uhlobo lwesibonelelo, futhi akakaze athole ukwesekwa kokuthi 'ahambele izwe lonke futhi avikele ukudla okushintshwe izakhi zofuzo.'” Nokho , imibhalo ikhombisa ukuthi iMonsanto inikeze uDkt Folta, emazwini abo, "Isibonelelo esingavinjelwe esilinganiselwa ku- $ 25,000 esingasetshenziswa ngokubona kwakho ukusekela ucwaningo lwakho namaphrojekthi wokufinyelela."
Ama-imeyili akhombisa ukuthi uMonsanto unikele ngemali ephendula a Isiphakamiso samakhasi ayi-9 kuDkt. Folta, lapho acela khona uMonsanto amaRandi ayizigidi ezingama-25,000 ukuze axhase “isixazululo sakhe esinezitezi ezintathu” 'enkingeni yokuxhumana nge-biotech.' Imisebenzi ehlongozwayo ibandakanya ukuhamba inyanga nenyanga iye eyunivesithi enkulu yasekhaya ukuyokwazisa ngama-GMO. Le mali yanikelwa ebhange lokudla ngemuva kokuthi amadokhumende esewonke emphakathini.
Isibonelo sikaFolta exoxa / evikela umkhiqizo womkhakha (iMonsanto's Roundup)
Icala likaDkt Folta libuye lathi (iphuzu 67), “UDkt. UFolta akakhulumi nganoma iyiphi imikhiqizo yomkhakha, ufundisa kabanzi ngobuchwepheshe. ” Kodwa-ke ufakazele ukuphepha okucatshangwa ukuthi yi-Monsanto's RoundUp, waze wafika ekuphuzeni lo mkhiqizo "ukukhombisa ukungabi nabungozi." Unakho uthe futhi "uzophinda futhi."
Phakathi ku Septhemba 29, 2015 imeyili, UJanine Sikes, Iphini Likamongameli Womsizi Wezindaba Zomphakathi e-University of Florida, ubhalele uzakwabo ngendaba kaLipton ye-NYT: “ngerekhodi ebengicabanga ukuthi le ndaba ilungile.”
Izingcaphuno ezivela empendulweni ye-NYT no-Eric Lipton ecaleni likaFolta, kusuka ngoJulayi 2018 isiphakamiso sesifinyezo sokugcina:
UMnu Lipton uthembele ekuxhumaneni noMmangali nge-imeyili, okunikezwe yena yi-UF ukuphendula isicelo samarekhodi womphakathi. Yize kungenzeka ukuthi uMmangali, usosayensi ozichazayo “osesidlangalaleni”, angavele angafuni ukuthi izinhlangano zakhe nezimboni ezinkulu njengeMonsanto zihlolwe, ukubika okunembile ngamarekhodi abhala lezo zinhlangano ngeke kube yisisekelo secala lokwehliswa isithunzi. (Ikhasi 1)
Phakathi kokunye, amarekhodi e-UF (kaFolta) abhalwe: imikhiqizo yezimboni; (1) Ukufakaza kommangali phambi kwezinhlangano zikahulumeni ngokuvumelana nezinqubomgomo ezisekela i-GMO; (25,000) Ukusebenzisana kommangali nezimboni, kufaka phakathi ukuxhumana okuningi kwe-imeyili nabamele imboni behlinzeka ngemicabango yakhe mayelana neqhinga lokunxenxa nokuchaza imizamo yakhe yokuxhumana nesayensi ye-GMO emphakathini; (2) okuthunyelwe kwakhe kweGMOAnswers, iwebhusayithi exhaswa yimboni; kanye (3) nezindleko zokuhamba ezikhokhelwa imboni, kufaka phakathi izindleko ezihlobene nohambo lwakhe lokuya endlunkulu yeMonsanto. (Ikhasi 4)
Akumangalelwanga ukuhlangana neMonsanto ngenkathi isebenzisana neMonsanto
UDkt Folta washo kaninginingi ukuthi wayengaxhumananga neMonsanto. Nokho ama-imeyili abikiwe yiThe New York Times yasungula ukuthi wayexhumana njalo noMonsanto kanye nobudlelwano babo nobudlelwano bomphakathi ukusebenzisana emisebenzini yokukhuthaza ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo.
Ama-imeyili akhombisa ukuthi iMonsanto nababambisene nabo basungule amathuba emidiya kanye nemisebenzi yokunxenxa uDkt Folta futhi basebenza naye ekuthumeleni imiyalezo. Ngo-Agasti 2014, uMonsanto wazisa uDkt Folta ukuthi uzothola ama- $ 25,000 ukuqhuba imisebenzi yakhe yokukhangisa. Ukuhwebelana kwe-imeyili kusikisela ukusebenzisana okusondele:
NgoJulayi 2014, Isikhulu seMonsanto sancoma isiphakamiso sikaDkt Folta sesibonelelo futhi sacela abanye abaphathi abane beMonsanto ukuthi banikeze impendulo ukuze bayithuthukise. Ubhale wathi, “Lokhu kuhle kakhulu 3rd-party ndlela yokwakha ukumela esibheke ukukuthuthukisa. ”
Ngo-Agasti 2014, UDkt. Folta uphendule incwadi yokwamukelwa kwesibonelelo sakhe, "Ngiyabonga ngaleli thuba futhi ngithembisa ukubuya okuqinile kutshalomali."
Ngo-Okthoba 2014, UDkt. Folta wabhalela isikhulu seMonsanto, “Ngiyajabula ukusayina noma yini oyithandayo, noma ukubhala noma yini oyithandayo.”
Ngemuva nje kwamasonto kwenziwe imininingwane yesibonelelo, ngo-Agasti 2014, uDkt Folta wagomela ukuthiakukho ukuxhumana okusemthethweni siye eMonsanto. ” Ubuye wathi yena akazange athole “ucwaningo noma uxhaso lomuntu siqu”Kusuka ku-“ Big Ag, ”yayine-“azikho izibopho zezezimali kunoma yiziphi izinkampani ze-Big Ag ezenza izitshalo ezishintshayo, kufaka phakathi iMonsanto, "futhi"lutho ukwenza INYANGA. ”
Ukuvuselelwa kwe-9/18: UDkt Folta inkontileka nenkampani yabameli iClifford Chance emele iBayer AG ukukhonza umxhumanisi ekulalelweni kokulamula ngesilinganiso sama- $ 600 ngehora kuze kufinyelele emahoreni ayi-120. Leyo mibhalo zenziwe zaziwa ngu IBiofortified, Inc., iqembu lokwenyusa le-GMO lelo ithe inqamule ubudlelwano noDkt Folta ngokwehluleka kwakhe ukudalula ngokugcwele ukungqubuzana okungaba khona kwenzalo.
Ukuvuselelwa kwe-11/17: UDkt Folta wathola futhi kudalulwe ukwamukelwa izimali zocwaningo ezivela kwaBayer AG (okusemkhankasweni wokuthola iMonsanto). Ngokuya nge- idokhumende itholakele yi-US Right to Know nge-FOIA, uBayer wathumela incwadi yomklomelo kuDkt Folta ngoMeyi 23, 2017 ngomxhaso wama-Euro angama-50,000 58,000 (cishe amaRandi ayizigidi ezingama-XNUMX), ngesiphakamiso sakhe mayelana ne “New Herbicide Chemistries Discovered in Functional Randomness.”
Okuhlongozwayo ukufihla imali yeMonsanto ekuhlolweni komphakathi
"Imali engiyisebenzisayo isobala," kusho uDkt. Folta wabhala kubhulogi yakhe, kepha eyakhe isiphakamiso seMonsanto ukuxhasa imisebenzi yakhe yokuphromotha ye-GMO ephethwe ngesigaba eseluleka iMonsanto ukuthi inganikela kanjani ngemali ukugwema ukudalulwa komphakathi:
“Uma ixhaswe ngqo kulolu hlelo njengomnikelo we-SHARE (okuyimali eyisisekelo engavinjelwe) ayikho ngaphansi kwe-IDC futhi ayikho kwi-akhawunti 'yezinxushunxushu'. Ngamanye amagama, iminikelo yokwabelana ayaziwa emphakathini. Lokhu kuqeda ukukhathazeka okungenzeka kwenhlangano exhasayo ethonya umyalezo. ”
IMonsanto ithumele umnikelo wama- $ 25,000 njenge- imali engavinjelwe kaDkt Folta.
Wavumela inkampani ye-PR yemboni ukuthi imbhalele i-ghost, wayiphika
Indaba ka-Agasti 2015 ku Ngaphakathi ne-Higher Ed uchaze izinsolo zokuthi inkampani ye-PR yezimboni zezolimo, uKetchum, unikeze uDkt Folta "izimpendulo ezisemathinini emibuzweni mayelana nama-GMO" ebudlelwaneni bomphakathi wemboni yezolimo iwebhusayithi, Izimpendulo ze-GMO.
UDkt Folta uphikile ukuthi usebenzisa umbhalo obhaliwe, ngokusho kwendaba:
"Mayelana nezimpendulo ezisemathinini, uthe 'wacasuka' ngesikhathi ezithola futhi akazange azisebenzise.”
UDkt Folta kamuva wavuma ukuthi usebenzisa umbhalo obhaliwe. I- I-New York Times ibike ngo-Septhemba 2015:
“Kodwa uKetchum wenze okungaphezulu kokunikeza imibuzo (yezimpendulo zeGMO). Izikhathi eziningana, yanikeza noDkt. Folta izimpendulo ezibhaliwe, wabe esesebenzisa amazwi nezwi, okuyisinyathelo manje athi kwaba yiphutha. ”
Ngo-Okthoba 2015 Indaba yeBuzzFeed, UDkt. Folta usithethelele isinqumo sakhe sokusebenzisa umbhalo kaKetchum obhalwe njengesipoki:
"Banginikeza izimpendulo ezinhle ngokwedlulele ezazibonakala," kusho uFolta kimi. “Ngigcwele umsebenzi. Mhlawumbe beyivila, kepha angazi ukuthi ibivila. Uma othile ethi, 'Sikucabangile ngalokhu futhi nakhu esinakho' - kunabantu abasebenza ezifundweni ezinababhali bezinkulumo abathatha amagama abanye abantu bawaveze njengawabo. Kulungile."
Kuthunyelwe imininingwane engamanga mayelana nokuxhaswa kwemali embonini yezibulala-zinambuzane e-University of Florida
Ngo-Okthoba 2014, uDkt Folta wabhala imininingwane enganembile ngemali yakhe eyunivesithi ngezimpendulo ze-GMO. Lapho bebuzwa, “Izinkampani ze-biotech zinikele malini eMnyangweni Wezesayensi Yezolimo, eNyuvesi yaseFlorida?” UDkt Folta uphendule wathi:
“Kuneminikelo engu-zero. ' Okungenani phakathi neminyaka emihlanu edlule (konke engikubhekile), azikho ngisho izibonelelo noma izivumelwano zocwaningo phakathi koMnyango Wezesayensi Yezolimo eUF kanye nanoma iyiphi inkampani ethengisa imbewu ye-biotech…
Eminyakeni emihlanu edlule, e iyunivesithi yonke, kwakukhona inani lama- $ 21,000 kwizibonelelo zikaMonsanto kwilungu elilodwa le-faculty ku-panhandle elifunda ukhula. Yilokho eyunivesithi yonke. Amarekhodi ethu asesidlangalaleni, ngakho-ke noma ngubani ubengaluthola lolu lwazi. ”
Eqinisweni, izinkampani ze-biotech zinikele ngaphezu kwe- $ 12 million ku-University of Florida ngonyaka wezimali u-2013/2014 kuphela, ngokusho kwemibhalo ye-University of Florida Foundation ithunyelwe ngu-NYT. IMonsanto yafakwa ohlwini njengomnikeli we "Gold" ngalowo nyaka, okusho ukuthi inkampani yanikela okungenani ama- $ 1 million. USyngenta ubengumnikeli “weDayimane” nge- “Cumulative Giving of $ 10 Million +” kanti iBASF inikele okungenani ngama- $ 1 million kwathi iPioneer Hi-Bred yanikela okungenani ama- $ 100,000.
IYunivesithi yaseFlorida 'inesimo' kuma-GMO 'esivumelana' neMonsanto, kanti uDkt Folta uphethe ukuyikhuthaza
Abaholi baseNyuvesi yaseFlorida bakholelwa ukuthi kuyindima eyunivesithi ukufundisa uquqaba ngama-GMO futhi babelana “ngokuma” noMonsanto, ngokusho kwe-imeyili etholwe uphenyo lwe-US Right to Know.
UDavid Clark, uprofesa we-horticultural biotechnology & genetics kanye nomqondisi we-University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences Plant Innovation Program (UF / IFAS), wabhalela isikhulu seMonsanto uRobb Fraley ngoJulayi 21, 2014:
“Bengicabanga ukuthi inkulumo yakho ibihle kakhulu futhi ifike ngesikhathi kakhulu emphakathini wethu, futhi iyahambisana nesimo esisithatha kumaGMO eNyuvesi yaseFlorida. Futhi, ngiyabonga ngokuthatha imizuzu embalwa ukuxoxa nami ngemuva kwalokho mayelana nokuthi kufanele ngabe sifundisa kanjani ama-80% wabathengi abazi kancane kakhulu ngobuchwepheshe.
Ngemva kokubuyela eGainesville, ngaxhumana noDkt. UKevin Folta noJack Payne mayelana nengxoxo yethu. UKevin ungumkhulumeli wethu oholayo e-UF esihlokweni se-GMO futhi uthathe icala lokwenza lokho esikhulume ngakho - ukufundisa uquqaba. UJack uyi-VP yethu enkulu ye-IFAS, futhi ngesonto eledlule ukhiphe ividiyo ekhombisa ukuthi iUF / IFAS imi kuphi ngodaba lwe-GMO: http://www.floridatrend.com/article/17361/jack-payne-of-uf-on-gmos-and-climate-change Bobabili bazimisele kakhulu ngalolu daba, futhi ngokubambisana baqinisa imizamo yabo yokusabalalisa igama elihle. ”
Kule vidiyo, uDkt. Payne uthi, “asikho isayensi esivumelana nalaba bantu abesaba ama-GMO.” Eqinisweni, ososayensi nezifundo eziningi baye bakwenza ukuphakamisa ukukhathazeka mayelana nama-GMO.
Ibambisene namaqembu angaphambi kokungathembeki emicimbini yemijikelezo ye-Biotech Literacy exhaswa ngezimali e-UF nase-UC Davis
A Ingqungquthela kaJuni 2014 ukukhuthaza ama-GMO abizwa nge- “Ikamu Le-Boot Biotech Literacy Project”Ikhokhiswe njengobambiswano phakathi kweYunivesithi yaseFlorida, i Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project futhi Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, amaqembu amabili angaphambili asebenza neMonsanto ukukhuthaza imikhiqizo yezimboni zezolimo nokuhlasela abagxeki bezimboni. Lawo maqembu womabili atshele ososayensi nezintatheli - ngokunganembile - ukuthi imicimbi ixhaswe yinhlanganisela kahulumeni, izifundiswa kanye nezimboni.
Ngo-2015, intatheli uBrooke Borel kubika kuSayensi Edumile:
“Ingqungquthela okukhulunywa ngayo yabizwa ngeBiotech Literacy Project Boot Camp. Ngamenywa ukuba ngibe khona futhi ngizokhuluma kwamanye amaphaneli, yize bekungakacaci ekuqaleni ukuthi lokho kuzobandakanya ini. Nganikezwa isizumbulu sama- $ 2,000, kanye nezindleko. Ngabhala ngabuza ukuthi ngubani ozohlinzeka ngalesi sikhundla futhi ngatshelwa ukuthi kuzohlanganiswa imali evela ku-UC Davis, i-USDA, imali yombuso kanye neBiotechnology Industry Organisation (BIO). ”
Phakathi ku 2016 imeyili kososayensi, uBruce Chassy we-Academics Review wathi imboni "ibingumxhasi ongaqondile" weBiotech Literacy Project Boot Camps:
“I-bootcamp yezinsuku ezintathu ibiza kakhulu ngoba sikhokhela wonke umuntu indawo yokulala nezindawo zokuhlala kanye ne-honaria. Ababambe iqhaza bathole ama- $ 3 nabethuli okungafika ku- $ 250 (izintatheli azibizi)… Ngidinga ukucacisa ngaphambili ukuthi ukwesekwa kwethu kuvela ku-BIO, USDA, state-USAID kanye nemali eyisisekelo, ngakho-ke imboni ayixhasi ngokungaqondile. Siphumele obala ngo-2,500% mayelana noxhaso. ”
Kodwa-ke, labo hulumeni kanye nemithombo yezemfundo bakuphikile ukuthi banikela ngezimali kwiBiotech Literacy Project Boot Camps, ngokusho kombiko kaPaul Thacker I-Progressive. UThacker wabhala, “okuwukuphela komthombo wemali olandelanayo imboni ye-biotech.”
Kokubili i-Academics Review and Genetic Literacy Project inomlando wokudukisa umphakathi ngezimali zawo nangemisebenzi yabo yokuvikela imboni yezolimo.
Ukubuyekezwa kwe-Academics kuye kwabanga kaningi njengeqembu elizimele, kepha ama-imeyili atholwe yi-US Right to Know embule ukuthi i-Academics Review yamiswa njengeqembu eliphambili ngosizo lweMonsanto, ngenkathi "igcina iMonsanto ngemuva ukuze ingalimazi ukwethembeka kolwazi."
Inothi elithi "Ukusobala ngokwezezimali" kwiwebhusayithi ye-Genetic Literacy Project lithi ezinganembile, izinguquko kaningi futhi kwesinye isikhathi iziphikisile. Umqondisi we-GLP uJon Entine une ubuhlobo obuningi obuseduze neMonsanto.
UDkt Folta uphinde wahlela lokho akubiza ngokuthi “usuku lwe-biotechnology literacy kanye nezokuxhumana”Ukukhuthaza ama-GMO eNyuvesi yaseFlorida ngo-2015. Izipikha zifaka osolwazi be-UF, isisebenzi saseMonsanto uVance Crowe, abamele amaqembu amabili ahambelana nomkhakha wezolimo (i Isikhungo Sobuqotho Bokudla futhi Kwenziwe kabusha), Futhi UTamar Haspel, umlobeli wephephabhuku lokudla weWashington Post.
UDkt Folta uchaze izinhlelo zakhe ku Isiphakamiso wasithumela eMonsanto efuna ukuxhaswa ngezimali emicimbini ayichaze “njengesixazululo senkinga yezokuxhumana nge-biotech” esivela “ekulawuleni umbono womphakathi” kanye “nokuqinisa kwabo imizamo yokufaka ilebula yokudla ngokungadingekile.” Kuma-imeyili wathumela eHaspel, UDkt. Folta uthe izethameli zomcimbi "we-biotechnology literacy" kuzoba "ososayensi, odokotela kanye nabanye ochwepheshe okudingeka bafunde ukukhuluma nomphakathi."
Uchaze ukunyakaza kokudla "njengeqembu labashokobezi"
UDkt Folta ubhalele phambili incwadi yango-2015 ebizwa ngokuthi “Fear Babe: Shattering Vani Hari's Glass House.” Umphambili uchaza ukunyakaza kokudla njengeqembu lamaphekula, uFolta aqamba igama elithi “Al Quesadilla”:
“U-Al Quesadilla ungumbonisi oqokelwe eqenjini lamaphekula lanamhlanje eliphakeme futhi elixhaswe ngezimali elifungile ukusebenzisa ukwesaba ukuphoqa izinguquko kwezepolitiki ezungeze ukudla. I-Al Quesadilla inomsebenzi ophakathi nendawo - ukuphoqelela izinkolelo zabo mayelana nokudla nokukhiqizwa kokudla emphakathini obanzi. Izinkolelo zabo ngokwemvelo zenkolo. Zisuka enhliziyweni ngokujulile futhi zangaphakathi. Izinkolelo zabo zisekelwe ekuchazelweni kahle kwemvelo, ukungathembi amasiko ezinkampani nokungabaza isayensi yanamuhla…
I-Al Quesadilla yiqembu lamaphekula eligugile nelinyonyobayo. Njengabo bonke amaphekula, bafeza izinhloso zabo ngokusebenzisa ukwesaba nokuphoqelela. Bahlela iziteleka ngokucophelela emigomeni esengozini - abathengi baseMelika… ”
Incwadi, eshicilelwe ngu ISenapath Press, yabhalwa nguMark Alsip, i-blogger ye-Bad Science Debunked, uMarc Draco, "ilunga elingumakadebona" ​​ekhasini le-Facebook Livinjelwe yi-Food Babe, noKavin Senapathy, ongumnikeli weForbes owayenezindatshana zakhe eziningana isuswe yiForbes.
Incwadi ikhuthaza ama-GMO, ibanga i-MSG kanye i-aspartame “azinabungozi” futhi zithi zichaza “amaqiniso abangela ukwesatshiswa kwezibulala-zinambuzane.”
UDkt Folta ukuchitha ukukhathazeka ngokuvezwa kwezibulala-zinambuzane ngezimangalo ze-propaganda, hhayi isayensi. Isibonelo, wenza futhi wehluleka ukulungisa isivakashi sakhe ngezitatimende eziningi ezesabekayo mayelana nokuphepha kwezibulala-zinambuzane kulo 2015 i-podcast interview no-Yvette d'Entremont, i- “SciBabe.” UFolta uthi:
Uma othile ekhathazekile ngokuchayeka kwezibulala-zinambuzane, “mbuze ukuthi unazo yini izimpawu zobuthi bezibulala-zinambuzane. Ngaphandle kokuthi babe nezimpawu zobuthi bezibulala-zinambuzane, cishe akukho okumele ukhathazeke ngakho. ”
"Ingozi yakho kunoma yiluphi uhlobo, ikakhulukazi, ukuchayeka kwezibulala-zinambuzane ekudleni kungenzeka ukuthi iphakathi nendawo ngokuphindwe izikhathi eziyizi-10,000 XNUMX nesigidi kunengozi yemoto."
Amaqhinga okuxhumana akhohlisayo
Esinye isibonelo sokuxhumana okulahlekisayo okuhlobene noDkt Folta sibhalwe ku-2015 Indaba yeBuzzFeed nguBrooke Borel. Indaba ilandisa ngokutholwa kukaBorel ukuthi uDkt Folta wasebenzisa umazisi ongamanga ukuxoxa nososayensi kanye naye uqobo kwi-podcast ebizwa nge- "The Vern Blazek Science Power Hour."
New York Times, "I-Food Industry Yabhalisa Izifundiswa ku-GMO Lobbying War, Ama-imeyili Show," ngu-Eric Lipton (9/6/2015)
Ama-imeyili athunyelwe ngu I-New York Times
I-Progressive, "Flacking for GMOs: How the Biotech Industry Plantts Positive Media," nguPaul Thacker (7/21/2017)
Huffington Post, "Uthando Olungapheli lukaKeith Kloor ngama-GMO," nguPaul Thacker (7/19/2017)
Izindaba Zomhlaba Wonke, "Imibhalo Idalula I-Canadian Teenager Target ye-GMO Lobby," ngu-Allison Vuchnich (12/22/2015)
Imvelo Biotechnology, "Ukumela Ukubonakala," nguStacy Malkan (1/2016)
Umama uJones, "Lawa ma-imeyili akhombisa uMonsanto encike koSolwazi ekulweni impi ye-GMO," nguTom Philpott (10/2/2015)
I-BuzzFeed, "Imbewu Money: Ukuvuma kweGMO Defender," nguBrooke Borel (10/19/2015)
USRTK Umbiko Omfushane, "Izintatheli zehlulekile ukudalula uxhaso lwemithombo ezivela eMonsanto"
Izindaba Ezizimele Zesayensi, "AbaPuppetmasters base-Academia (noma Lokho okususwe yi-NYT)," nguJonathan Latham (9/8/2015)
USRTK incwadi eya kuDkt Folta mayelana nezicelo zethu ze-FOIA
Uphenyo lwethu Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, Isayensi Engalungile Ikhishwe, BASF, Bayer, Bio, Ikamu lokuqala le-Biotech Literacy Project, UBruce Chassy, UClifford Chance, Umkhandlu Wolwazi Lwezinto Eziphilayo, UDavid Clark, U-Eric Lipton, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, Izimpendulo ze-GMO, I-GMO, IHorticulture Sciences Department University yaseFlorida, UJack Payne, UJon Entine, UKavin Senapathy, UKetchum, UKevin Folta, UMarc Draco, UMark Alsip, Monsanto, New York Times, izibulala-zinambuzane, Iphayona Lizalwe, URobb Fraley, SciBabe, ISenapath Press, Syngenta, UTamar Haspel, Ihora le-Vern Blazek Science Power, UC Davis, University of Florida, USDA, Yvette d'Entremont
Izindinganiso zeNewsweek Eziyinqaba Zababhali Bombono
Posted on January 31, 2018 by UStacy Malkan
Isibuyekezo sikaMashi 2019: INewsweek ithola imali yesikhangiso kuBayer; ishicilela ama-op-eds athanda iBayer
Amaqiniso awanandaba ekuphawuleni okuphrintiwe yiNewsweek inqobo nje uma umbhali “ebonakala eyiqiniso.” Lowo ngumqondo okhathazayo ovela ekushintshaneni nge-imeyili engibe nako noMhleli Wezombono weNewsweek uNicholas Wapshott ngemuva kokuthi ngiphakamisile ukukhathazeka ngekholomu ehlasela ukudla okuphilayo lokho kwakubhalwe ngumlobi ohlulekile ukudalula izibopho zakhe zomkhakha wezibulala-zinambuzane.
Okuphilayo hit isiqeshana nguHenry I. Miller wagijima kwiNewsweek ezinyangeni ezimbalwa ngemuva kwe- I-New York Times yembula ukuthi indatshana eseForbes enegama likaMiller yayikade ikhona kubhalwe isipoki nguMonsanto. IForbes inqamule ubudlelwano bayo noMiller yasusa yonke imibhalo yayo engosini yayo. UMiller akazange adalule lutho kulokho esiqeshini sakhe seNewsweek yize echithe izigaba ezimbalwa ehlasela uDanny Hakim, intatheli yeNew York Times owaveza ihlazo lokubhala ngezipoki.
UMiller wenze izimangalo ezingamanga ngokulima okuphilayo esebenzisa imithombo yomkhakha wezibulala-zinambuzane.
I-op-ed yehle yehla isuka lapho, isebenzisa imithombo yomkhakha wezibulala-zinambuzane ukwenza izimangalo ezingamanga ngokulima okuphilayo nokuhlasela abantu abavela kwi Uhlu lwe- “target” lokho kwakwenzelwe iMonsanto ngu UJay Byrne, owayengumqondisi wezokuxhumana eMonsanto. UMiller ucaphune u-Byrne esiqeshini engazange akhulume ngokuhlangana kweMonsanto.
Akukho kulokhu okubonakala kuphazamisa u-Wapshott, ngokusho kokushintshaniswa kwe-imeyili okurekhodiwe.
Amaqiniso kaMiller 'Aphika Ngokucacile'
NgoJan. 22, ngathumela i-imeyili ku-Wapshott ngibuza ukuthi ngabe uyazi yini ukuthi:
The New York Times waveza uMiller ngokushicilela udaba eForbes ngaphansi kwegama lakhe okwakubhalwe ngalo isipoki nguMonsanto, nokuthi iForbes isusile zonke izindatshana zayo
A Uhlelo luka-2015 lweMonsanto PR leyo ixoxa ngezinhlelo zenkampani zoku vikela i-glyphosate ngokumelene nokukhathazeka komdlavuza ibala njengezinto zayo zokuqala ezenziwayo: “Bandakanya uHenry Miller
Umthombo uMiller osetshenziswe ku-athikili yakhe yeNewsweek, uJay Byrne, ubengumsebenzi waseMonsanto (ongaziwa kanjalo). Ngokuvumelana ne ama-imeyili engiwabike lapha, UByrne wasebenza neMonsanto ukusungula iqembu labafundi “abazimele” ababexhaswa ngezimali ngasese yimboni. I- iqembu langaphambili elibizwa nge-Academics Review ihlasele imboni yezemvelo njengo “mkhonyovu wokumaketha,” okuyisihloko esifanayo esihlokweni seMiller's Newsweek
UMiller une umlando omude wokusebenzisana no - no ebeka izinsizakalo zakhe ze-PR - izinkampani ezidinga usizo lokukholisa umphakathi ukuthi imikhiqizo yazo ayiyona ingozi futhi ayidingi ukulawulwa.
Nansi impendulo ka-Wapshott: “Sawubona Stacy, ngiyaqonda ukuthi wena noMiller ninomlando omude wengxabano ngalesi sihloko. Ukuphika ngokusobala okuqinisekisile kwakho. UNicholas ”
Ngibhale ngabuyela emuva ngifuna ukucaciselwa.
Sawubona uNicholas, ukucacisa:
UMiller uyakuphika ukuthi washicilela ikholomu eyabhalwa nguMonsanto ngaphansi kwegama lakhe eForbes nokuthi iForbes isizisusile zonke izindatshana zayo? (Indaba ye-NYT, Indaba yokubuka ehoxisiwe)
UMiller uphika uhlelo lukaMonsanto lwe-PR lokuxazulula isilinganiso somdlavuza se-IARC sohlu lwe-glyphosate “Engage Henry Miller” on ikhasi 2, into 3?
UMiller uyakuphika ukuthi uJay Byrne, owayekade esebenza eMonsanto engaziwa kanjalo kwi-athikili yakhe yeNewsweek, wayebandakanyeka ekusunguleni i-Academics Review njengeqembu eliphambili? (UByrne akakwenqabanga ukubhala lezi Ama-imeyili.)
Mina noMiller asivumelani yebo, kepha okungenhla kungamaqiniso, futhi kuyenzeka. Ngabe ucabanga ukuthi kulungile kubafundi bakho ukuthi baqhubeke nokushicilela umsebenzi wakhe ngaphandle kokudalula ubudlelwane bakhe neMonsanto?
Waphendula wathi, “Ngicabanga kanjalo. Sengike ngahlangana noMiller futhi ubonakala eqotho. Futhi ngikuthola kunzima ukukholelwa ukuthi ukuphika kwakhe ngokusobala kungamanga. Sizodinga isivivinyo esigcwele ukuthola iqiniso nokuthi lezo zinsizakusebenza, sibonga okuhle, ngaphezu kwamandla ethu. ”
Amazinga Wokudalulwa Kwe-COI?
Ngikuthola kunzima ukukholelwa ukuthi ukuphika kwakhe ngokusobala kungamanga.
Ngibhalele u-Wapshott futhi, ngikhombisa ukuthi ukuqulwa kwecala akudingekile ecaleni likaMiller, ngoba amaqiniso atholakele ngokubika ku-New York Times futhi aqinisekiswa ngumkhulumeli weForbes uMia Carbonell, owatshela iThe Times:
“Bonke ababambe iqhaza kuForbes.com basayina inkontileka edinga ukuthi badalule noma yikuphi ukungqubuzana kwezintshisekelo okungaba khona futhi bashicilele kuphela okuqukethwe okungumbhalo wabo wokuqala. Ngesikhathi sifikelwa ukuthi uMnu. Miller wephule le migomo, sayisusa i-blog yakhe kuForbes.com futhi saqeda ubudlelwano bethu naye. ”
Ngabe i-Newsweek inenqubomgomo efanayo yokufuna ababhali ukuthi badalule ukungqubuzana okungaba khona kwezintshisekelo futhi basebenzise ukubhala kwabo kuphela? U-Wapshott akazange awuphendule lowo mbuzo. (Ngaphansi kwesonto kamuva, kwakukhona "isiphithiphithi kwaNewsweek”Phakathi kwezinguquko zabasebenzi nezinkinga zezimali. Umhleli wezepolitiki uMatthew Cooper ubhale kweyakhe incwadi yokwesula, Abanye abahleli “bafuna ukungachofozi ngokunganaki bencamela ukunemba, baphindaphinde ngobulungiswa… angikaze ngibubone ubuholi obungenandaba.”)
Inkinga Ekude Ngale KweNewsweek
Izindinganiso ezibuthakathaka, ezididekile, ezingekho ukudalula ukungqubuzana kwezintshisekelo kuyinkinga edlula kude iNewsweek. Okwe-2015 ku-CJR, intatheli uPaul Thacker ubuze izinhlangano zabezindaba eziyi-18 ezihlanganisa isayensi ukuthi zichaze amazinga okudalula kwazo zombili izintatheli kanye nemithombo eziyisebenzisayo ezindabeni zazo, kwathi ezili-14 zaphendula.
"Izimpendulo ziletha ukuxubana kwezinqubomgomo," kubhala uThacker. “Abanye badweba umugqa ogqamile - ukuvimbela izintatheli ekubeni nezibopho zezimali kunoma imiphi imithombo yangaphandle. Abanye bavumela ezinye izindleko nezindleko zokukhuluma. Ukwenza izinto zibe nzima nakakhulu, ezinye izinhlangano zinemithetho ebhaliwe, kanti ezinye zibheka izehlakalo ngamacala ngamacala. Amazinga akhuthazwa yimiphakathi yezobuchwepheshe nawo abonakala ehlukile. ”
Ezinye izitolo zisebenzisa izindinganiso ezahlukahlukene kuzintatheli nakubabhali bezincwadi, njengoba ngafunda lapho ngibuza ukuthi kungani umlobi wephephabhuku laseWashington Post uTamar Haspel engathatha imali yokukhuluma kusuka kwezolimo amaqembu ezimboni ngenkathi ebhala ngalo mkhakha njengengxenye yesigqi sakhe esivamile sekholomu. Izintatheli eWashington Post azivunyelwe ukwenza lokho, kepha esimweni sababhali bezincwadi, umhleli unquma.
Konke kubi kakhulu. Futhi ezinye izitolo ngokusobala zeqa umugqa ogqamile ngokushicilela imibono yamaqembu nabantu abasebenza nezinhlangano ukukhuthaza ukubukwa kwesayensi ye-pro-industry ngaphandle kokutshela abafundi ngokubambisana kwezinkampani.
I-USA Namuhla Inamazinga Angajwayelekile Abalobi Bombono Nabo
NgoFebhuwari 2017, amashumi amabili ezempilo, ezemvelo, ezabasebenzi kanye namaqembu ezintshisekelo zomphakathi kubhale abahleli be-USA Today ebacela ukuthi bayeke ukushicilela amakholomu ezesayensi yi-American Council on Science and Health (ACSH), iqembu eliphambili lezinkampani elithola uxhaso ezinkampanini zamakhemikhali, ezemithi kanye nogwayi ukuze zenze isayensi.
Imibhalo yezimali eputshukile kusuka ngo-2012 kukhombisa ukuthi i-ACSH iyicela kanjani imali: ngokubuza uwoyela, ugwayi, izimonyo nezinkampani zamakhemikhali ngemali yokushintshanisa imikhankaso yokuvikela umkhiqizo. Okwakamuva ukubika iyasungula leyo ACSH wasebenza neMonsanto ukuvikela i-glyphosate ekukhathazekeni komdlavuza.
"I-USA Today akufanele ngabe isiza leli qembu ukuthi ligqugquzele ubuwena obungelona iqiniso njengomthombo othembekile, nozimele kwezesayensi," la maqembu amabili abhalela abahleli. "Abafundi bakho bafanelwe ulwazi olunembile mayelana nokuthi leli qembu limele ini nokuthi limelelwa ngubani, njengoba becabanga ngokuqukethwe yikholomu."
Cishe unyaka kamuva, i-USA Today isashicilela amakholomu ngabasebenzi be-ACSH futhi isahluleka ukwazisa abafundi bayo ngemali ye-ACSH evela ezinkampanini ezikhuthaza uhlelo lwazo.
Empendulweni ye-imeyili yangomhla ka-1 Mashi 2017, uBill Sternberg ongumhleli wekhasi labahleli be-USA Today wachaza:
“Ngokwazi kwethu, wonke amakholomu okukhulunywa ngawo abhalwe noma abhalwa ngokubambisana ngu-Alex Berezow, osekuyisikhathi eside eyilungu leBhodi yabaNikeli be-USA TODAY. UMnu. Berezow usibhalele ama-op-eds angaba ngama-25 kusukela ngo-2011, futhi simthatha njengezwi elithembekile ezindabeni zesayensi. Uneziqu ze-PhD kwi-microbiology azithola e-University of Washington, waba ngumhleli wokuqala weRealClearScience futhi waba nomthelela ezindaweni eziningi ezihamba phambili. ”
UBerezow manje useyisikhulu e-ACSH, futhi isimo sakhe se- "@USAToday contributor" sivela ku-bio yakhe ku-Twitter, lapho evame ukuhlasela abagxeki bemboni yezibulala-zinambuzane, ngokwesibonelo lokhu okusanda kwenzeka i-tweet embi equkethe umfanekiso oveza ezocansi womhlengikazi enikeza isiguli i-enema yekhofi.
Ngabe i-USA Today ifuna ngempela ukuhlotshaniswa nalolu hlobo lokuxhumana kwesayensi?
Ubuqotho kanye nokungafihli lutho ekubikeni kwesayensi
Izitolo zezindaba zingenza kangcono kunalezi zibonelo e-Newsweek nase-USA Today, futhi kufanele zenze kangcono. Bangaqala ngokwenqaba ukushicilela amakholomu ngamaqembu angaphambili ezinkampani kanye nabaphenyi be-PR abazenza njengabacabangi besayensi abazimele.
Bangakwazi ukusebenzisa izinqubomgomo ezicacile neziqinile ezidinga bonke ababhali bezintatheli nezintatheli ukuthi badalule ukungqubuzana okungaba khona kwezintshisekelo zabo kanye nemithombo abayichazayo emsebenzini wabo.
Ngesikhathi lapho umphakathi ungabaza ukuba semthethweni kwemithombo yezindaba, kubaluleke kakhulu kunakuqala ukuthi yonke imibhalo ilandele izindinganiso eziphakeme kakhulu zokuziphatha kobuntatheli futhi isebenzele umphakathi ngeqiniso elikhulu nangokusobala ngangokunokwenzeka.
UStacy Malkan ungumqondisi obambisene futhi ungumsunguli we-US Right to Know, intshisekelo yomphakathi engenzi nzuzo, iqembu labathengi nocwaningo lwezempilo lomphakathi.
Uphenyo lwethu Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, ACSH, U-Alex Berezow, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, UBill Sternberg, UDanny Hakim, UHenry I. Miller, UJay Byrne, Monsanto, Newsweek, UNicholas Wapshott, imboni yemvelo, RealClearScience, UTamar Haspel, USA Today
Umbiko Omfishane Wezintatheli Kukhulunywe Ngawo Ezicelweni Zethu ze-FOIA
Posted on September 28, 2015 by UGary Ruskin
Futhi ubone: Ukubhabha kwi-Food Beat: Kunini lapho kungqubuzana kwezintshisekelo?
Umbhali Wekholomu Wokudla waseWashington Post Uya eBat yeMonsanto
NgoSepthemba 23, Washington Post umlobeli wezokudla UTamar Haspel wamukelwa ukuthi uthole "inala" yemali evela emithonjeni yezimboni ezixhasa ezolimo.
Ngemuva kokungeniswa kwakhe, ngicabange ukuthi kungaba wusizo ukubika ngezintatheli - kubandakanya uHaspel - okukhulunywe ngazo kumadokhumenti esiwatholile asuka kuzicelo zamarekhodi omphakathi.
I-US Right to Know iqhuba i- uphenyo lwezimboni zokudla nezolimo, amafemu abo e-PR namaqembu angaphambili, kanye nosolwazi ababakhulumelayo.
Kuze kube manje, izintatheli ezintathu ziza ngezindlela ezithokozisayo: U-Amy Harmon, uKeith Kloor noTamar Haspel. Lezi zintatheli zivela kumongo we UJon Entine, ngubani mhlawumbe oholayo Ukusebenza kwe-PR ukusebenzela ukuthuthukisa imibono yemboni yezolimo, nemithi yokubulala izinambuzane kanye nama-GMO.
U-Entine ungumsunguli futhi umphathi omkhulu we-Genetic Literacy Project, okuyi, kanye ne I-PR iqinile UKetchumka- Izimpendulo ze-GMO, amaqembu emboni yezolimo abonakala kakhulu ngaphambili. U-Entine futhi ungumsunguli nomongameli wenkampani ye-PR i-ESG MediaMetrics, okuyi- amaklayenti afake i-agronhemical giant Monsanto.
U-Amy Harmon yintatheli ye- New York Times. Wayeyingxenye ye- Times iqembu elanqoba umklomelo wePulitzer ngo-2001, kwathi ngo-2008 lawina Pulitzer ngokubika okuchazayo.
NgoSepthemba 23, 2013 ngo-7: 44 pm, UJon Entine uthumele i-imeyili uRenee Kester: “FYI, ngicabanga ukuthi ngikhulume no-Amy Harmon ukuthi enze indaba yaseHawaii eHawaii. . . futhi ngimnikeze imininingwane yakho ye-imeyili kanye neyakwaKirby, ngakho-ke angashayela ngesikhathi esithile uma ekulandela ngempela lokhu. ” UKirby Kester unjalo umongameli we-Hawaii Crop Improvement Association, iqembu eliphambili lezimboni zezolimo.
NgoJanuwari 4, 2014, the New York Times ushicilele udaba olusekuqaleni kwekhasi luka-Amy Harmon, olunesihloko esithi “Ukufuna amaLonely Amaqiniso Kuzilimo Eziguqulwe Ngokofuzo. ” Indaba isuselwe eKona, eHawaii.
Ngo-2014, uHarmon wawina indawo yesibili yeNhlangano Yezintatheli Zezemvelo “Umklomelo kaKevin Carmody Wokubika Okujulile Ovelele, Imakethe Enkulu”Kokuthi“Amaqiniso Ngama-GMO, ”Uchungechunge olwalunendatshana ethi“Ukufuna amaLonely Amaqiniso Kuzilimo Eziguqulwe Ngokofuzo. "
On September 30th, UHarmon uhlelelwe ukukhuluma kuya ICornell Alliance yeSayensi, a iqembu elixhaswe yiBill and Melinda Gates Foundation ukukhuthaza ama-GMO. Iqembu kufaka isikhalazo ngokumelene ne-US Right to Know's Umthetho Wenkululeko Yolwazi (FOIA) izicelo.
UKeith Kloor yintatheli ezimele ebhalele yena Nature, Isayensi Insider, Discover, Slate nezinye izitolo. UKloor ubhale ama-athikili amaningi we-pro-GMO abelokhu ekhona evezwe yiJon Entine's Genetic Literacy Project.
UKloor kukhulunywa ngaye ezindaweni ezimbili emibhalweni ye-FOIA.
Ku-imeyili eyodwa, uJon Entine ubhekisa kuKeith Kloor njengo “umngani wami omuhle kakhulu".
Kwenye i-imeyili, ngo-Okthoba 18, 2014, uDkt. Channapatna Prakash, ummeli nomphathi weGMO eTuskegee University, Ama-imeyili U-Adrianne Massey we-Biotechnology Industry Organisation (BIO), kanye nabanye abaningana, ukudlulisa isexwayiso esivela ku- ULorraine Thelian, iphini likasihlalo wenkampani ye-PR iKetchum ukuthi "umphakathi we-hacker Anonymous uhlela uchungechunge lokuhlaselwa kuma-biotechnology kanye namawebhusayithi wemboni yokudla… Inhlangano yabasebenzi kanye namawebhusayithi ezinkampani e-CBI [Council for Biotechnology Information] amalungu abhekiswe kulokhu kuhlasela okuhleliwe." UDkt. Prakash uyabhala, "U-Adrianne ngikopishe uKevin Folta, uKarl von Mogel, uDavid Tribe noKeith Kloor nalapha. "
UDkt Prakash uthumele i-imeyili kuJay Byrne (owayengumqondisi wezokuxhumana kwezinkampani eMonsanto), UJon Entine, uBruce Chassy (imboni yezolimo khuthazaI-Val Giddings (i-VP yangaphambili ye-BIO), UHenry Miller (ummeli wemboni yezolimo), UDrew Kershen (ummeli wemboni yezolimo, UKlaus Ammann, UPiet van der Meer, UMartina Newell-McGloughlin (ummeli wemboni yezolimo), UKarl Haro von Mogel (ilungu lebhodi labaqondisi le- IBiology Iqinisiwe, iwebhusayithi ye-pro-GMO), uKevin Folta (kwezolimo ummeli wemboni), UKeith Kloor noDavid Tribe (ummeli wemboni yezolimo).
UKeith Kloor uyena kuphela intatheli owathola le imeyili.
I-imeyili isho ukuthi iKloor isebenza ngokubambisana nabameli abaziwayo bemboni yezolimo.
UKloor ubhale izindatshana ezintathu ebezigxeka izicelo zeFOIA zase-US Right to Know Isayensi Insider, Discover futhi Nature.
NgoMashi 23, 2015, UKloor wethule inkulumo yeCornell Alliance for Science, ephethe i- Isikhalazo ngokumelene ne-US Right to Know's FOIA.
UTamar Haspel uyi umlobi wekholamu ku- Washington Post. Ubhale amakholomu amaningi we Thumela ukuvikela noma ukuncoma ama-GMO akade aba khona evezwe yiJon Entine's Genetic Literacy Project.
Ngo-2015, iHaspel uzuze umklomelo weJames Beard Foundation okwakhe Thumela amakholomu.
NgoJuni 2014, iHaspel Wakhuluma engqungqutheleni esekela umkhakha mayelana "Ososayensi bangayingenela kanjani kangcono impikiswano ye-GMO nomphakathi ongabazayo? ” Ingqungquthela ibihlelwe nguJon Entine noCami Ryan, okumanje usekhona isayensi yezenhlalo iholela iMonsanto. Ingqungquthela yayiholwa amaqembu amabili aphambili embonini yezolimo, i Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project futhi Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, kanye neYunivesithi yaseFlorida, ethola uxhaso olukhulu ezinkampanini zezolimo, njengoba kuphawulwe ngoSepthemba 6 esihlokweni ku New York Times.
IHaspel iphinde yamodela a iphaneli ihlelwe by Isikhungo saseNorth Carolina Biotechnology, "enikeza izinzuzo zesikhathi eside kwezomnotho nakwezenhlalo eNyakatho Carolina ngokusekela ucwaningo lwe-biotechnology, ibhizinisi, ezemfundo kanye nenqubomgomo yamasu ezweni lonke."
Engxoxweni kaSepthemba 23 ebanjwe yi- Washington Post, ephendula umbuzo wokuthi uyayithola yini imali emithonjeni yezimboni, uNkk Haspel ubhale ukuthi, “Ngikhuluma futhi ngilinganisa amaphaneli nezimpikiswano kaningi, futhi kungumsebenzi engikhokhelwa wona. ” Kamuva ngalolo suku, ngabuza uNkk. Haspel ku-Twitter ukuthi uthole malini embonini yezolimo nakumaqembu ayo angaphambili. Uphendule wathi, “Njengoba noma yiliphi iqembu elikholelwa ukuthi i-biotech linokuthile elikunikezayo 'yiqembu langaphambili,' inala!"
Ingabe kufanelekile kufayela le- Washington Post Umlobi wekholamu ukubhala amakholomu akhanyayo ngama-GMO ngenkathi evela ezingqungqutheleni ezifana nalezi zomkhakha? Ngabe kungukushayisana kwezintshisakalo kuHaspel ukwamukela imali ezithakazelweni zenkampani yezolimo ayihlanganisa njengengxenye yesigqi sakhe njenge Thumela umlobeli wezokudla? Uthole malini uHaspel kusuka kuzintshisekelo zomkhakha wezolimo?
Ezinye izintatheli zigxeke izintatheli “ngokwenza ibhakede” kumasekhethi ezikhulumi. Isibonelo, yangaphambili Washington Post Umhleli Ophethe Kusho uBen Bradlee, “Ngifisa sengathi kungaphela. Angiyithandi. Ngicabanga ukuthi kuyonakalisa. Uma i-Insurance Institute of America, uma kukhona into enjalo, ikukhokhela u- $ 10,000 ukwenza inkulumo, ungangitsheli ukuthi awonakaliswanga. Ungasho ukuthi awunayo futhi ungasho ukuthi uzohlasela nezinkinga zomshuwalense ngendlela efanayo, kodwa ngeke. Awukwazi. ”
UHaspel wabhala ku Washington Post ukuthi uzokhuluma kuphela emicimbini lapho “uma izinkampani ezenza inzuzo zibandakanyeka kulo mcimbi (okuyiyona ejwayelekile), azikwazi ukuba yizwi kuphela. Ngakho-ke, ngizokhuluma engqungqutheleni ebixhaswe yiMonsanto kanye ne-USDA ne-NC State University, kodwa hhayi umcimbi oxhaswe yiMonsanto kuphela. ” Kodwa-ke, engqungqutheleni kaJuni 2014, lapho uHaspel akhuluma khona, abekho abameli babathengi ababehlelelwe ukuthi bakhulume, kuphela abameli bezimboni.
On Ngo-Okthoba 16, uHaspel uhlelelwe ukukhuluma kuya ICornell Alliance yeSayensi, iqembu le-pro-GMO lelo ukusingatha isikhalazo ngokumelene ne-US Right to Know's FOIA.
UHaspel ubelokhu egxeka izicelo ze-US Right to Know FOIA. Ngo-Agasti 17, kuTwitter, wabhala: “Imali / isikhathi / amandla okuchithwa kumoshelwe ku-garyruskin's attack-spirited, and self-interested attack on @kevinfolta! Ngabe singadlulela kokunye okuwusizo?”Abanye abavumelananga nesinqumo sakhe sezindaba. NgoSepthemba 6th, u-Eric Lipton owaphumelela kabili umklomelo wePulitzer ubhale i-athikili ikakhulu esekwe kwizicelo zethu ze-FOIA - ikakhulukazi uProfesa Kevin Folta wase-University of Florida - obesekhasini lokuqala leSonto New York Times. Lo mbhalo uveze ukuthi uFolta, owenqabe kaningi ubudlelwane noMonsanto, empeleni wayethole isibonelelo esingadalulwanga esingu- $ 25,000, kanye nezabelo zokubhala ezivela enkampanini, futhi wasebenza eduze nayo kanye nenkampani yayo ye-PR uKetchum, eyayibhalela yena imibhalo futhi yahlela nabezindaba nokumnxenxela ukuba abe nemihlangano.
I-US Right to Know iyiqembu elimele abathengi. Sizama ukuveza lokho imboni yokudla engafuni sazi. Sikholelwa ukuthi kuwusizo emphakathini ukubona ukuthi izinkampani zokudla nezolimo zenza kanjani ubudlelwano bazo nomphakathi busebenza. Leyo ngenye indlela esingasiza ngayo abathengi ukuthi bahlole izimangalo nolwazi abalutholayo ezinkampanini ezibandakanyeka ekukhiqizweni kwethu kokudla, amafemu abo e-PR kanye nabasebenza nabo, kanye nezintatheli ezisebenza nabo.
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, U-Adrianne Massey, U-Amy Harmon, Bill and Melinda Gates Foundation, Bio, Inhlangano Yezimboni Ye-Biotechnology, UBruce Chassy, UCami Ryan, CAS, I-CBI, I-Channapatna Prakash, ICornell Alliance yeSayensi, Umkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology, UDavid Tribe, UDrew Kershen, ESG MediaMetrics, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, Izimpendulo ze-GMO, Inhlangano Yokuthuthukiswa Kwezitshalo zaseHawaii, Henry Miller, UJay Byrne, UJon Entine, UKarl von Mogel, UKeith Kloor, UKetchum, UKevin Folta, UKirby Kester, UKlaus Ammann, ULorraine Thelian, UMartina Newell-McGloughlin, Monsanto, Isikhungo saseNorth Carolina Biotechnology, UPiet van der Meer, URenee Kester, UTamar Haspel, I-Tuskegee University, University of Florida, USDA, I-Val Giddings